လိင်နှင့်ဆက်နွယ်သောအွန်လိုင်းအပြုအမူများ၊ ရွယ်တူချင်းစံနှုန်းများနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏အတွေ့အကြုံ - Integrative Model တစ်ခုကိုစမ်းသပ်ခြင်း (၂၀၁၅) - သင့် ဦး နှောက်သည်သင့်ဆံပင်အပေါ်
PLoS တစ်ခုမှာ။ 2015 ဇွန် 18;10(6):e0127787. doi: 10.1371/journal.pone.0127787.
Doornwaard သည် SM1, Bogt TF Ter1, Reitz E ကို2, ဗန်တွင်း Eijnden RJ1.
ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွင်လိင်နှင့်ပတ်သက်သောအင်တာနက်အသုံးပြုမှု၏အခန်းကဏ္onကိုသုတေသနပြုမှုသည်အင်တာနက်နှင့်အွန်လိုင်းအပြုအမူများကိုဆယ်ကျော်သက်များ၏ဘ ၀ တွင်သက်ရောက်မှုရှိသည့်အချက်များ၊ ဥပမာသက်တူရွယ်တူများ၏လုပ်ငန်းစဉ်များကဲ့သို့သောအခြားအပြုအမူများနှင့်မကြာခဏအထီးကျန်စေခဲ့သည်။ ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာပေါင်းစပ်ထားသောမော်ဒယ်ကိုစမ်းသပ်ရန်ဖြစ်သည်။ (ဥပမာ - လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအင်တာနက်ပစ္စည်း [SEIM] ကိုအသုံးပြုခြင်း]) နှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု (ဆိုလိုသည်မှာလူမှုကွန်ယက် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုအသုံးပြုခြင်း) နှင့်ဆက်စပ်သောအွန်လိုင်းအပြုအမူများသည်ရွယ်တူချင်းများနှင့်မည်သို့ဆက်နွယ်မှုရှိကြောင်းရှင်းပြရန်ဖြစ်သည်။ ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် ပတ်သက်၍ အတွေ့အကြုံများကိုခန့်မှန်းရာတွင်စံသတ်မှတ်ချက်များ။ 1,132 ဒတ်ခ်ျဆယ်ကျော်သက် (M (အသက်) T1 = 13.95; အကွာအဝေး 11-17; 52.7% ယောက်ျားလေးများ) မှ longitudinal ဒေတာအပေါ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းမော်ဒယ်လိင် -related အွန်လိုင်းအပြုအမူ, ရိပ်မိရွယ်တူစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူအတွေ့အကြုံအကြားတစ်ပြိုင်တည်း, တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်သက်ရောက်မှုသရုပ်ပြ လိင်အပြုအမူ။ SEIM အသုံးပြုမှု (ယောက်ျားလေးများအကြား) နှင့် SNS အသုံးပြုမှု (ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအကြား) သည်ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုသက်တူရွယ်တူများကလက်ခံခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်လိင်တက်ကြွသောရွယ်တူချင်းအရေအတွက်ခန့်မှန်းချက်များတိုးများလာခြင်းကိုခန့်မှန်းခဲ့သည်။ ဤအမြင်များကအဆုံး၌ဆယ်ကျော်သက်များ၏လေ့လာမှုအဆုံးတွင်လိင်အပြုအမူနှင့် ပတ်သက်၍ အတွေ့အကြုံတိုးလာလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းခဲ့သည်။ ယောက်ျားလေးများ၏ SNS သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ပတ်သက်သောအတွေ့အကြုံတိုးလာခြင်းကိုလည်းတိုက်ရိုက်ဟောခဲ့သည်။ ဤတွေ့ရှိချက်များကဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ကျန်းမာရေးကိုမြှင့်တင်ရန်စနစ်စုံသုတေသနနှင့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလိုအပ်ကြောင်းကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းကမ္ဘာ၏အမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းများတို့မှသုတေသနတစ်ခုကြီးထွားလာခန္ဓာကိုယ်မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လိင်-related အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေ၏အခန်းကဏ္ဍကိုဖြေရှင်းခဲ့သည်။ လိင်-related အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေ [လိင် tinted arousal / ဖျော်ဖြေရေး, သတင်းအချက်အလက်-ရှာ, ဆက်သွယ်ရေး, တူးဖော်ရေး, Self-ပုံဖော်ခြင်းနှင့်ကျဘာတစ်ဝှမ်းဆုံလည်လှုပ်ရှားမှုများများအတွက်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုရည်ညွှန်း1, 2] ။ ထိုသို့သောအပြုအမူ, ဖန်တီးဖြန့်ဝေခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်အသုံးပြုသူများအဖွင့်, လက်ခံ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများဆက်သွယ်အလတ်စားကနေအသုံးပြုသူမှတလမ်း, ဒါမှမဟုတ်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါလက်ခံအမျိုးအစားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်တာနက်ပစ္စည်း (SEIM) ၏မြီးကောင်ပေါက် '' အသုံးပြုမှုအထူးသဖြင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်နှင့်လေ့လာမှုများ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်က (ကပြန်လည်သုံးသပ်တွေ့ကဒီပစ္စည်းကိုမှထိတွေ့မှု၏, attitudinal စိတ်ခံစားမှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များမှတ်တမ်းတင်ရန်ရှာ ) ။ အပြန်အလှန်အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေ, လူမှုရေးကွန်ယက်အဖွဲ့ဆိုဒ်များ (SNS) နှင့် ပတ်သက်. မကြာသေးမီက [ဖွဲ့စည်းရန်နှင့်အကဲဖြတ်လိင်နှင့်လိင်ဆွဲဆောင်မှု၏အယူအဆအဖြစ်နှင့်အတူစမ်းသပ်နှင့်တဦးတည်းရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာဖော်ကျူးဖို့မြီးကောင်ပေါက်အဘို့အလားအလာအစွမ်းထက်ပလက်ဖောင်းအဖြစ်သုတေသနပြုခဲ့ကြ4-6] ။ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် SEIM မတူဘဲ, SNS အသုံးပြုမှုအမျိုးအစားထဲမှာအတိအလင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်; အများဆုံးမြီးကောင်ပေါက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့ရှာကြံ၏ရည်ရွယ်ချက်အဘို့ဤအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံကြဘူး။ မည်သို့ပင်ဆိုစေအများအပြားလေ့လာမှုများ [ဥပမာ 4-6] SNSs မြီးကောင်ပေါက်သုံးပြီးသောအခါထောက်ပြကြရွယ်တူချင်းအားဖြင့်လိင်-ဆက်စပ်မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ထိတွေ့စေခြင်းငှါအဖြစ်, အခြားအသုံးပြုသူများနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံ, ဒါမှမဟုတ်လိင်-related အကြောင်းအရာသူတို့ကိုယ်သူတို့ဖန်တီးဖြန့်ဝေ။ ယနေ့အထိသက်သေအထောက်အထား SEIM အသုံးပြုညွှန်ပြခြင်းနှင့် SNS အသုံးပြုမှုကိုမြီးကောင်ပေါက် '' ဖွံ့ဖြိုးဆဲလိင်အမျိုးမျိုးရှုထောင့်ခန့်မှန်း။ ဤရွေ့ကား [လိင်ဆီသို့ပိုပြီးအလိုလိုနှင့်ဆာပသဘောထားတွေပါဝင်သည်7-9တဦးတည်းရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူ] လျော့နည်းကျေနပ်မှု [2, 10] ပို. ခန္ဓာကိုယ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်ကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ [2, 11, 12] အဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသောနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူပိုမိုအဆင့်မြင့်အတွေ့အကြုံကို [7, 8].
သို့သျောလညျးဆိတျကှသူတို့ကြိုတင်ခန့်မှန်းခဲ့ရာမှတာလျော့နည်းသည်ဤလိင်-related အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေကိုမြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖှံ့ဖွိုးတိုးတပုံဖော်ဘယ်လိုလူသိများသည်။ ထူးခြား, လိင်-related ကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုများ၏သက်ရောက်မှုများအပေါ်လေ့လာမှုများမကြာခဏလူငယ်များရဲ့ဘဝတွေကိုတခြား, အော့ဖ်လိုင်းဖြစ်စဉ်များကနေအင်တာနက်ကိုနှင့်အွန်လိုင်းအပြုအမူအထီးကျန်ရှိသည်ဟု [13, 14] ။ ဤသည်ထင်ရှားသောဂေဟဗေဒဆိုင်ရာနှင့် multisystemic ချဉ်းကပ်-ထိုကဲ့သို့သော Bronfenbrenner ရဲ့ [အဖြစ်နှငျ့မတူဘဲ၌တည်ရှိ၏15] ဂေဟစနစ်များအားသီအိုရီ-ကြောင်းစနစ်များကိုလွှမ်းမိုးနှင့် interrelating မျိုးစုံ၏ရလဒ်ကိုအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖှံ့ဖွိုးတိုးတ conceptualize  ။ မြီးကောင်ပေါက် '' ဘဝအသက်တာ၌သြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏မျိုးစုံစနစ်များများထဲတွင်ရွယ်တူချင်းအထူးသဖြင့်အရေးပါမှုဖြစ်စဉ်းစားနေကြသည်။ [မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းလူငယ်များကသူတို့မိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူအချိန်ပမာဏဖြုန်း, သူတို့သည်ရွယ်တူများ၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့်အထင်မြင်ယူဆအပေါ်သိသိသာသာတန်ဖိုးအားထား17, 18] ။ ဒီအယူအဆနှင့်ကိုက်ညီ, Meta-သရုပ်ခွဲသက်သေအထောက်အထားလိင်နှင့်စပ်လျဉ်းရိပ်မိသက်တူရွယ်တူစံချိန်စံညွှန်းပြင်းပြင်းထန်ထန်မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းကိုလမျးညှနျကွောငျးဖျောပွခဲ့သညျ။ အထူးရွယ်တူ၏သဘောထားအမြင် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ခွင့်ပြုချက် (ဆိုလိုသည်မှာတရားရုံးမိန့်စံချိန်စံညွှန်း) နှင့်ရွယ်တူ၏သဘောထားအမြင် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (ဆိုလိုသည်မှာဖော်ပြရန်စံချိန်စံညွှန်း) မြီးကောင်ပေါက် '' ကိုယ်ပိုင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့တွေ့ပါပြီ .
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအင်တာနက်နှင့်ရွယ်တူနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူတိုးပွားလာထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပေးထား [17, 18, 20] နှင့်အချို့သောအွန်လိုင်းအပြုအမူတွေ-အထူးသဖြင့်အပြန်အလှန်အပြုအမူတွေ SNS အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်-ယူအရပျမှာအနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတစ်ဦးရွယ်တူအခြေအနေတွင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပါကသုတေသနပိုကောင်းသည်ဤစနစ်များ interrelate ဘယ်လိုနားလည်နှင့်မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖှံ့ဖွိုးတိုးတပုံဖော်အတွက်ပေါင်းစပ်ဖို့ Integrated ချဉ်းကပ်နည်းယူကြောင်းလိုအပ်သောပုံရသည် ။ မီဒီယာနှင့်သက်တူရွယ်တူသက်ရောက်မှုများ domains များအတွက်သော့ချက်သီအိုရီအပေါ်ဆွဲ, လက်ရှိလေ့လာမှု၏ရည်မှန်းချက်ကိုဘယ်လိုနှစ်ခုလိင်-related အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေ (ဆိုလိုသည်မှာ SEIM သုံးပါနှင့် SNS သုံးပါ) ကိုရှင်းပြထားတဲ့ Integrated မော်ဒယ်စမ်းသပ်ဖို့ပဲခန့်မှန်းအတွက်ရိပ်မိသက်တူရွယ်တူစံချိန်စံညွှန်းနှင့်ဆက်စပ်နေပါသည် စစ်မှန်သောဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူမြီးကောင်ပေါက် '' အတွေ့အကြုံကို။
လိင်-related အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေနဲ့ရိပ်မိသက်တူရွယ်တူစံချိန်စံညွှန်းများ Integrated မော်ဒယ်
သင်္ဘောသဖန်း 1 လိင်-related အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေနဲ့ရိပ်မိသက်တူရွယ်တူစံချိန်စံညွှန်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူမြီးကောင်ပေါက် '' အတွေ့အကြုံကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ interrelate ဖြစ်နိုင်သည်ကိုမည်သို့လက်ခံနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခု Integrated မော်ဒယ်ကိုပြသထားတယ်။ အဆိုပါမြှားပုံစံတည်ဆောက်ထားသောပေါ်တွင်အမျိုးမျိုးသောသီအိုရီယူဆချက်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ (က) အခြေခံအသင်းအဖွဲ့များ, (ခ) ကိုတိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုနှင့် (ဂ) သွယ်ဝိုက်သက်ရောက်မှု: ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှ, စံပြလိင်-related အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေ, ရိပ်မိသက်တူရွယ်တူစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြားဆက်ဆံရေးသုံးမျိုး hypothesizes ။ အောက်ပါအတိုင်းအဘယျသို့ခုနှစ်တွင်ဤဆက်ဆံရေးယူဆချက်တစ်ခုစီးရီးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသောလိမ့်မည်။
လိင်-related အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေ, ရိပ်မိသက်တူရွယ်တူစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ Integrated မော်ဒယ်။
အခြေအနေတွင်လိင်-related အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေ (အခြေခံအသင်းအဖွဲ့များ)
ဒါဟာ ပို. ပို. [မီဒီယာများ၏မြီးကောင်ပေါက် '' ရွေးချယ်ရေးနှင့်အသုံးပြုမှုတွင်တက်ကြွအခြေအနေတွင်-မှီခိုမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကြောင်းကိုအသိအမှတ်ပြုဖြစ်ပါတယ်21] ။ မီဒီယာအလေ့အကျင့်မော်ဒယ်အဆိုအရ [22, 23] လူငယ်များရဲ့မီဒီယာရွေးချယ်မှုလူဦးရေအစုတခု၏ရလဒ် (ဥပမာကျားမ, အသက်), ပုဂ္ဂိုလ်ရေး (ဥပမာအကျိုးစီးပွား, အတွေ့အကြုံများ), နှင့် sociocontextual (ဥပမာ, မိသားစုရွယ်တူ) လမ်းကြောင်းမတူညီဖြစ်ကြသည်။ အဲဒီလူငယ်ကို select ဖြစ်ပါသည်သူတို့ဖြစ်ကြပြီးတစ်ဦးအထူးသဖြင့်ယခုအချိန်တွင်သူတို့ကိုအဓိကအဘယျသို့သောသူနှင့်အတူ fit ကြောင်းမီဒီယာကိုသုံးပါ။ ဒါကသူတို့ရဲ့အွန်လိုင်းအပြုအမူများအတွက်လည်းမှန်သည်။ အထူးသလေ့လာမှုများ [ပိုများသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူ, မြီးကောင်ပေါက်ကိုပိုမိုမကြာခဏ SEIM အသုံးပြု. သတင်းပို့ကြောင်းပြသကြ7, 8, 24, 25] ။ အလားတူပင်မြီးကောင်ပေါက် [ဘုံသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ရွယ်တူချင်းအကြားတန်ဖိုးဖြစ်, သူတို့ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုရိပ်မိသည့်အခါမကြာခဏလိင်အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာသုံးစွဲဖို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှငျ့ပတျသကျသောမီဒီယာအကြောင်းအရာထိတွေ့ခဲ့သည်24, 26, 27] ။ ဤအတွေ့ရှိချက်အပေါ်အခြေခံပြီးကျနော်တို့ကအောက်ပါတွေးဆ:
hypothesis 1a: အခြေခံမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူပိုပြီးအတွေ့အကြုံရှိသည်သူကိုမြီးကောင်ပေါက်ကိုပိုမိုမကြာခဏ SEIM ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။
hypothesis 1b: အခြေခံ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (ဆိုလိုသည်မှာတရားရုံးမိန့်စံချိန်စံညွှန်း) ၏ပိုပြီးခွင့်ပြုချက်ဖြစ်သူတို့၏ရွယ်တူချင်းရိပ်မိသူကိုမြီးကောင်ပေါက်မှာနှင့်ပိုပြီးလိင်တက်ကြွဖြစ် (ဆိုလိုသည်မှာဖော်ပြရန်စံချိန်စံညွှန်း) ကိုပိုမိုမကြာခဏ SEIM ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။
SNS အသုံးပြုမှုများ၏ psychosexual ဆက်စပ်မှုအပေါ်ပင်ကိုယ်မူလလေ့လာမှုများရှားပါးဖြစ်ကြသည်။ သို့သော် Facebook နှင့်ထိုကဲ့သို့သော display ကိုနဲ့ဆက်စပ်အချက်များပေါ်တွင်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရည်ညွှန်း display ကိုအပေါ်တစ်ဦးမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုပြုလုပ်သူတွေကိုပြသလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာညွှန်းဆိုသူတို့ရဲ့ Non-ပြသရွယ်တူချင်းထက် Facebook ကိုပိုမိုဆောင်ရွက်နေခဲ့ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, displayers [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူပိုပြီးအတွေ့အကြုံနှင့်ရွယ်တူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏အတည်ပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုထဲမှာပါဝင်ကြသည်အားကောင်းသဘောထားအမြင်အစီရင်ခံတင်ပြ5] ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် SNSs မြီးကောင်ပေါက်အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-စကားရပ်သည်အရေးကြီးသောနေရာများအားဝတျပွုစခွေငျးငှါစိတ်ကူးနှင့်အညီဖြစ်ကြောင်း [4, 6] ။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သတွေးဆ:
hypothesis 1c: အခြေခံမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူပိုပြီးအတွေ့အကြုံရှိသည်သူကိုမြီးကောင်ပေါက် SNSs ပိုမိုအချိန်ဖြုန်းပါလိမ့်မယ်။
hypothesis 1d: အခြေခံ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (ဆိုလိုသည်မှာတရားရုံးမိန့်စံချိန်စံညွှန်း) ၏ပိုပြီးခွင့်ပြုချက်ဖြစ်သူတို့၏ရွယ်တူချင်းရိပ်မိသူကိုမြီးကောင်ပေါက်မှာနှင့်ပိုပြီးလိင်တက်ကြွဖြစ် (ဆိုလိုသည်မှာဖော်ပြရန်စံချိန်စံညွှန်း) SNSs ပိုမိုအချိန်ဖြုန်းပါလိမ့်မယ်။
လိင်-related အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုငါ) ကြိုတင်ခန့်မှန်း
ကြှနျုပျတို့၏သမာဓိမော်ဒယ်လိင်-related အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေကိုလက်ခံနှင့်အပြန်အလှန်တိုက်ရိုက်နှင့်ထူးခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူအတွေ့အကြုံမြီးကောင်ပေါက် '' နောက်ဆက်တွဲအဆင့်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်းယူဆတယ်။ ဒီနေရာတွင်ကအတွေ့အကြုံအခြေခံအဆင့်ဆင့်အဘို့ကိုထိန်းချုပ်ထားခြင်းဖြင့်သတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည် စံပြလိင်-related အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုအောက်ပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက် Over-အချိန်တိုး hypothesizes ။ လိင်-related အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေနောက်ဆက်တွဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကြိုတင်ခန့်မှန်းပုံကိုရှင်းပြသောတစ်ဦးကသီအိုရီရှုထောင့်လူမှုသိမှုသီအိုရီပင်ဖြစ်သည်  ။ အထူးသ, ဒီသီအိုရီကလူသိသာထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ဍမော်ဒယ်များ၏အပြုအမူစောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့်အသစ်သောအပြုအမူတွေကိုချမှတ်ကြောင်း postulates ။ ဤသည်စူးစမ်းလေ့လာသင်ယူမှုသို့မဟုတ်အပြုအမူမော်ဒယ် (ခ) အခန်းကဏ္ဍမော်ဒယ်များကတော့လေ့လာသူ (ဥပမာအတူတူကျားသို့မဟုတ်အသက်အရွယ်) ကိုဆင်တူပါတယ်, ပြသ (က) အပြုအမူတွေဟာလေ့လာသူမှသက်ဆိုင်ရာအခါပေါ်ပေါက်ဖို့အထူးသဖြင့်ဖွယ်ရှိသည်, (ဂ) အခန်းကဏ္ဍမော်ဒယ်များဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်သို့မဟုတ် အဆင့်အတန်းမြင့်မားခြင်း, (ဃ) အခနျးကဏ်ဍမော်ဒယ်များ [အပြုအမူပြသနေအကြိုးခံစားရပုံပေါ်21, 28] ။ ဒါကွောငျ့ဆွဲဆောင်မှုအွန်လိုင်းမော်ဒယ်များများ၏လေ့လာရေးမှတဆင့်မြီးကောင်ပေါက်အကြိုးနေသောအပြုအမူသင်ယူဖို့လာနိုငျသညျ။ ထိုသို့သောအပြုအမူ [သေချာပေါက်ချက်ချင်းလုပ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အစားအခွအေနကကျလာသောအခါ, ပြန်ထုတ်နှင့်လျှောက်ထားစေခြင်းငှါအမူအကျင့် script များအဖြစ်သိမ်းဆည်းထားကြသည်မဟုတ်21, 29] ။ W ကSEIM စပ်လျဉ်းကိုအသုံးပြုဖို့ ith, လူမှုရေးသိမြင်မှုသီအိုရီထပ်တလဲလဲအနည်းငယ်အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များနှင့်အတူလိင်ခံစားဆွဲဆောင်မှုဇာတ်ကောင်ကိုစောင့်ရှောက်မည်သည့်အခါလိင်ကိုစိတ်ဝင်စားမြီးကောင်ပေါက်, သူတို့အကြိုးအတိုင်းဤအပြုအမူရိပ်မိအကျိုးဆက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်သူတို့ကိုယ်သူတို့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လှုံ့ဆော်ခံစားရလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းထားသည်။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့တွေးဆ:
hypothesis 2a: ပိုမိုမကြာခဏ SEIM အသုံးပြုမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူအတွေ့အကြုံတိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့်ခန့်မှန်းပါလိမ့်မယ်။
SEIM နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်များ, social networking site များသဘာဝလျော့နည်းအတိအလင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ၏ SNSs အသုံးပြု. မြီးကောင်ပေါက်ထို့ကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ပါဝငျဆွဲဆောင်မှုမော်ဒယ်များ၏အမြင်အာရုံ display တွေ Internalize အတွင်း, နောက်ဆုံးမှာ, စောငျ့ရှောကျဖို့လျော့နည်းဖွယ်ရှိပါလိမ့်မည်။ အဲဒီအစား, SNSs အပေါ်အပြုအမူမော်ဒယ်တစ်ဦးထင်ရှားတဲ့နှင့်တန်ဖိုးဆောင်ပုဒ်အဖြစ်လိင်များ၏လေ့လာရေးမှတဆင့်ရာအရပျယူနိုငျသညျ။ ဒါက SNSs အပေါ်လိင်သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်၏ဆွေးနွေးမှုများ၏အယူအဆတွေဘုံလျှင် (ဥပမာ, မှတ်ချက်များမှတစ်ဆင့်သို့မဟုတ် 'likes') အပြုသဘောအားဖြည့်, ဖြစ်ပြီး, အသက်အရွယ်-အိမ်ထောင်ဖက်အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးသို့မဟုတ် shared, သူတို့ကလိင်နှင့်စပ်လျဉ်းမြီးကောင်ပေါက် '' အပြုသဘောဆောင်တဲ့ရလဒ်မျှော်လင့်ထားတိုးမြှင့်နိုင်ပြီး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမြှင့်တင်ရန် [6, 28, 30] ။ စူးစမ်းလေ့လာသင်ယူမှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာမော်ဒယ်လ်အပြင်, social networking site များသူတို့ကိုယ်သူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းများတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။ အမျိုးမျိုးသောလေ့လာမှုများတချို့ဆယ်ကျော်သက် [ရင်ခုန်စရာနှင့် / သို့မဟုတ်လိင်မှုဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်ထုတ်လွှင့်ဖို့စိတ်ကူးယဉ်ဆက်ဆံရေးအစပျိုးဖို့, ဒါမှမဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ကိုရှာဖွေ SNSs ကိုအသုံးပြုဖို့အကြံပြုခဲ့ကြ4, 6, 31, 32] ။ ဤအအယူအဆတွေ၏အခြေခံတွင်ကျနော်တို့တွေးဆ:
hypothesis 2b: ပိုမိုမကြာခဏ SNS အသုံးပြုမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူအတွေ့အကြုံတိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့်ခန့်မှန်းပါလိမ့်မယ်။
လိင်-related အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေကိုရိပ်မိသက်တူရွယ်တူစံချိန်စံညွှန်း (တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှု II ကို) ကြိုတင်ခန့်မှန်း
[လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ multisystemic Conceptual အောက်ပါ16] ကျနော်တို့လက်ခံနှင့်အပြန်အလှန်လိင်-related အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုလိင်နှင့်စပ်လျဉ်းမြီးကောင်ပေါက် '' ရိပ်မိသက်တူရွယ်တူစံချိန်စံညွှန်းသြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်း hypothesize ။ ပညာရှင်များကယေဘုယျအား [ကြောင့်၎င်း၏တဦးတည်းတဖက်သတ်ဇာတ်ကောင်ဖို့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာမကြာခဏထိတွေ့မှုကသူတို့ကိုလှည့်ပတ်ကမ္ဘာ၏မြီးကောင်ပေါက် '' သညာပုံဖော်စေခြင်းငှါ, ထိုစောဒကတက်ခဲ့ကြ21] ။ ဒါကစိတ်ကူးစိုက်ပျိုးရေးသီအိုရီအတွက်အမြစ်တွယ်နေသည်  တသမတ်တည်းမီဒီယာပုံဖော်ခြင်းတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာထိတွေ့ပြီးနောက်, ထိုကဲ့သို့သောမိဘများသို့မဟုတ်ရွယ်တူကဲ့သို့သောအခြားလူမှုရေးအေးဂျင့်ကနေသတင်းအချက်အလက်ပယ်ဖျက်စေခြင်းငှါ, ထိုအဖြစ်မှန်တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်နှင့်ဘက်လိုက်ကိုယ်စားပြုမှုဖွဲ့စည်းကြောင်းစောဒကတက်ရာ။ ထို့နောက်အချိန်ကျော်, မြီးကောင်ပေါက်တဖြည်းဖြည်း "ပွုစုပြိုးထော" သို့မဟုတ်မီဒီယာရဲ့ကိုယ်စားပြုမှုနှင့်ကိုက်ညီသော "အစစ်အမှန်လောက" နှင့် ပတ်သက်. ယုံကြည်ချက်ချမှတ်လိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကားယုံကြည်ချက်ကိုလည်းရွယ်တူချင်းအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏လက်ခံမှုနှင့်ပျံ့နှံ့အကြောင်းကိုယူဆချက်ပါဝင်နိုင်သည်။ အများအပြားကလေ့လာမှုများ-အများဆုံး Cross-Section အလုပ်ပြီးသော၏ [ရိုးရာမီဒီယာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်ထိတွေ့မြီးကောင်ပေါက် (ဥပမာ, ရုပ်မြင်သံကြား, မဂ္ဂဇင်း) လိင်ကကြုံတွေ့ရွယ်တူများ၏နံပါတ်များကိုမြင့်မားခန့်မှန်းချက်ပူဇော်ကြောင်းညွှန်ပြဒီဇိုင်းများ-ပါပြီ34-36] ။ ဒါကစိတ်သဘောထားဖွယ်ရှိ SEIM အသုံးပြု. မြီးကောင်ပေါက်မှတိုးချဲ့လိမ့်မည်။ SEIM လိင်အဖြစ်ဘုံ, ပျော်စရာသရုပျဖျောနှင့်အန္တရာယ်အခမဲ့လျှင်အထူးသ, ကမကြာခဏထိတွေ့မှု "လူတိုင်းကလုပ်နေတယ်" လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပျံ့နှံ့နေတဲ့နှင့်ကြောင်းကိုလက်ခံနိုင်ဖွယ်-ကြောင်းသဘောထားအမြင်ပြိုးထောငျစခွေငျးငှါ  ။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သ hypothesize:
hypothesis 3a: ပိုမိုမကြာခဏ SEIM အသုံးပြုမှုရွယ်တူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏အတည်ပြုဖြစ်ကြောင်းတိုးမြှင့်သဘောထားအမြင် (ဆိုလိုသည်မှာတရားရုံးမိန့်စံချိန်စံညွှန်း) ကြိုတင်ခန့်မှန်းပါလိမ့်မယ်။
hypothesis 3b: ပိုမိုမကြာခဏ SEIM အသုံးပြုမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူအတှေ့အကွုံ (ဆိုလိုသည်မှာဖော်ပြရန်စံချိန်စံညွှန်း) ရှိသည်သောရွယ်တူများ၏နံပါတ်များတိုးမြှင့်ခန့်မှန်းချက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းပါလိမ့်မယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်စပ်လျဉ်းမြီးကောင်ပေါက် '' ရိပ်မိသက်တူရွယ်တူစံချိန်စံညွှန်းလည်းသူတို့ရဲ့ SNS အသုံးပြုမှု၏ရလဒ်အဖြစ်ပြောင်းလဲပစ်ကြောင်းကိုမျှော်လင့်ရန်အကြောင်းပြချက်ရှိပါသည်။ သုတေသနထိုကဲ့သို့သောမီဒီယာမော်ဒယ်များနှင့်အတူမှတ်ပုံတင်နှင့်ရိပ်မိသရုပ်မှန်အဖြစ်မီဒီယာပါဝင်ပတ်သက်မှု၏ရှုထောင့်, ကျော်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှု၏ပမာဏအထက်မြီးကောင်ပေါက် '' သညာကိုသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါညွှန်ပြထားပြီး [6, 37] ။ SNSs အပေါ်အများဆုံးအကြောင်းအရာများမြီးကောင်ပေါက် '' ရွယ်တူအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးသောအပေးထား, မှတ်ပုံတင်နှင့်ရိပ်မိသရုပ်မှန် SNS အသုံးပြုမှုကိုပိုမိုလေးနက်ဖြစ်နိုင်သည်။ အမှန်မှာကြိုတင်အလုပ် [လူငယ်အဖြစ်တိကျစွာအစစ်အမှန်ဘဝသဘောထားများနှင့်အပြုအမူထင်ဟပ် SNSs အပေါ်ဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်မှကိုးကားရိပ်မိလေ့ကြောင်းညွှန်ပြထားပြီး38, 39] ။ အချိန်မြီးကောင်ပေါက် SNSs အပေါ်ဖြုန်း၏ပမာဏနှင့်အတူပေါင်းစပ် [5, 30], ဒီ hypothesize ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်:
hypothesis 3c: ပိုမိုမကြာခဏ SNS အသုံးပြုမှုရွယ်တူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏အတည်ပြုဖြစ်ကြောင်းတိုးမြှင့်သဘောထားအမြင် (ဆိုလိုသည်မှာတရားရုံးမိန့်စံချိန်စံညွှန်း) ကြိုတင်ခန့်မှန်းပါလိမ့်မယ်။
hypothesis 3d: ပိုမိုမကြာခဏ SNS အသုံးပြုမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူအတှေ့အကွုံ (ဆိုလိုသည်မှာဖော်ပြရန်စံချိန်စံညွှန်း) ရှိသည်သောရွယ်တူများ၏နံပါတ်များတိုးမြှင့်ခန့်မှန်းချက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းပါလိမ့်မယ်။
ရိပ်မိသက်တူရွယ်တူစံချိန်စံညွှန်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှု III ကို) ကြိုတင်ခန့်မှန်း
အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသုတေသနမြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်ချသက်တူရွယ်တူစံချိန်စံညွှန်းရေပန်းစားအကြောင်းကိုသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကလွှမ်းမိုးကြောင်းတသမတ်တည်းသရုပ်ပြထားပါတယ်  ။ ဤလုပ်ငန်းစဉ် [လူမှုရေးစံနှုန်းများသီအိုရီမှာဖော်ပြထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်40] တစ်ဦးချင်းစီဘုံသည်အဘယ်အရာသူတို့ရဲ့သဘောထားအမြင်နှင့်အတူမာတိကာ၎င်းတို့၏အပြုအမူထိန်းညှိဖော်ပြထားသောလက်ခံခဲ့သည်, ဒါမှမဟုတ်သိသိသာသာ Reference အကြားမျှော်မှန်းထားသည်။ ဤရွေ့ကားလို့ခေါ်လူမှုရေးစံချိန်စံညွှန်းအမူအကျင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုလမ်းညွှန်အတွက်စံတန်ဖိုးဖိအားများနှင့်ရလဒ်ကိုမျှော်လင့်ထားအဖြစ်လုပ်ကိုင်ရန်။ အကြောင်း, ရွယ်တူ၏သဘောထားအမြင်မှတဆင့်သူတို့အကဲဖြတ် (ဆိုလိုသည်မှာဖော်ပြရန်စံချိန်စံညွှန်း) 'လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ခွင့်ပြုချက် (ဆိုလိုသည်မှာတရားရုံးမိန့်စံချိန်စံညွှန်း) မြီးကောင်ပေါက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုလက်ခံနှင့် / သို့မဟုတ်မည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်ရှိမရှိလေ့လာသင်ယူရန် လာ. , ရွယ်တူ၏သဘောထားအမြင်မှတဆင့်' 'လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဖြစ်ပါတယ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုစတင်ရန်အကြိုးထို့ကြောင့်အကျိုးရှိသည်ဖြစ်စေ [40, 41] ။ ဒါဟာတရားရုံးမိန့်နဲ့ဖော်ပြရန်စံချိန်စံညွှန်းများခွင့်ပြုချက်နှင့်အခြို့သောအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုလူငယ်များသည် '' ရွယ်တူအကြောင်းကိုပုဂ္ဂလဒိဋ္ယုံကြည်ချက် '' အပေါ်အခြေခံပြီးဖြစ်ကြောင်းသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်, ထို့ကြောင့်အမှန်တကယ်သက်တူရွယ်တူစံချိန်စံညွှန်းများအထင်လွဲမှားမှုများဖြစ်နိုင်သည်။ ကျနော်တို့တွေးဆ:
hypothesis 4a: ရွယ်တူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏အတည်ပြုဖြစ်ကြောင်းအားသဘောထားအမြင် (ဆိုလိုသည်မှာတရားရုံးမိန့်စံချိန်စံညွှန်း) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူအတွေ့အကြုံတိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့်ခန့်မှန်းပါလိမ့်မယ်။
hypothesis 4b: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံလျက်ရှိသောရွယ်တူများ၏နံပါတ်များအဆင့်မြင့်ခန့်မှန်းချက် (ဆိုလိုသည်မှာဖော်ပြရန်စံချိန်စံညွှန်း) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူအတွေ့အကြုံတိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့်ခန့်မှန်းပါလိမ့်မယ်။
ဆယ်ကျော်သက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ (အန္တရာယ်) အပြုအမူအတွက်ရိပ်မိသက်တူရွယ်တူစံချိန်စံညွှန်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုစုံစမ်းလေ့လာရေးမြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုသူတို့ရွယ်တူသူတို့ရွယ်တူ [၏အတည်ပြုယုံကြည်အရာကိုထက်ပြုပါယုံကြည်အရာကိုပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်စပ်ကြောင်းပြသကြ13, 19] ။ လူမှုရေးစံချိန်စံညွှန်းအပေါ်စာပေဖော်ပြရန်နှင့်တရားရုံးမိန့်စံချိန်စံညွှန်းများအကြားကဒီခြားနားချက်အဘို့အဘယ်သူမျှမရှင်းလင်းသောအယူအဆသို့မဟုတ်ရှင်းပြချက်ကိုထောက်ပံ့ပေးပေမယ့်လည်း, ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ရွယ်တူ '' ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု၏သဘောထားအမြင်ကထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လက်ခံနိုင်သောအရာမှအတိုင်းအတာနှင့် ပတ်သက်. အရေးပါသောနောက်ထပ်အချက်အလက်ဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းသယ်ဆောင်ကြောင်းအကြံပြုထားသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက် [13, 19] ။ ဒါကဆယ်ကျော်သက်သူတို့လိင်တက်ကြွမဟုတ်သောရွယ်တူချင်းအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ခွင့်ပြုချက်၏အပြည့်အဝကိုသတိထားမိမည်မဟုတ်ပါသော်လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံသူကိုရွယ်တူချင်းလည်းထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူနှင့်ဒါလုပ်နေတာတခြားသူတွေရဲ့အတည်ပြုယူဆစေခြင်းငှါ, ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကတရားရုံးမိန့်စံချိန်စံညွှန်းတိကျတဲ့အပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ကြုံတွေ့ဖိအားအဖြစ် conceptualized လျှင် (ဆိုလိုသည်မှာရွယ်တူများကမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း, အတိုင်းအတာသောအပြုအမူအတွက်ပါဝငျရိပ်မိနေသည်မှ), တရားရုံးမိန့်စံချိန်စံညွှန်းအတွက်ပိုပြီးသြဇာဖြစ်မည်အကြောင်းငြင်းခုံခဲ့သ မြီးကောင်ပေါက် '' ကိုယ်ပိုင်အပြုအမူ  ။ ဤအခြားနားရှင်းလင်းချက်ပေးထားတဲ့ကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူအတွေ့အကြုံမြီးကောင်ပေါက် '' အဆင့်ကိုခန့်မှန်းအတွက်တရားရုံးမိန့်နဲ့ဖော်ပြရန်စံချိန်စံညွှန်းများဆွေမျိုးအရေးပါမှုအကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမယူဆချက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
ယူဆချက် 3a-ဃနှင့် 4a + ခထောကျပံ့နေတယ်ဆိုရင်, သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းသွယ်ဝိုက်သက်ရောက်မှုအစုတခုဖွဲ့စည်းရန်ပေါင်းစပ်စေခြင်းငှါ, ကြောင်းလိင်-related အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေကနေရိပ်မိသက်တူရွယ်တူစံချိန်စံညွှန်းတဆင့်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူအတွေ့အကြုံ၏နောက်ဆက်တွဲအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသ:
hypothesis 5a: ပိုမိုမကြာခဏ SEIM အသုံးပြုမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏သက်တူရွယ်တူခွင့်ပြုချက် (ဆိုလိုသည်မှာတရားရုံးမိန့်စံချိန်စံညွှန်း) ၏အမြင်များကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူအတွေ့အကြုံတိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့်ဦးတည်သွားစေပါလိမ့်မယ်။ [SNS အသုံးပြုရန် Hypothesis 5c]
hypothesis 5b: ပိုမိုမကြာခဏ SEIM အသုံးပြုမှုကိုလိင်တက်ကြွရွယ်တူ (ဆိုလိုသည်မှာဖော်ပြရန်စံချိန်စံညွှန်း) ၏နံပါတ်များခန့်မှန်းချက်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူအတွေ့အကြုံတိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့်ဦးတည်သွားစေပါလိမ့်မယ်။ [SNS အသုံးပြုရန် Hypothesis 5d]
ထိုကဲ့သို့သောသွယ်ဝိုက်သက်ရောက်မှုများအတွက်အထောက်အထား [ရိုးရာမီဒီယာနှင့်မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုနှင့်အပြုအမူအကြား link ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလေ့လာမှုများမှာတွေ့ရှိထားသည်36, 42] ။ သို့သော်ဤလေ့လာမှုများ Cross-Section ဒီဇိုင်းများအလုပ်သို့မဟုတ်ယာယီလုပ်ငန်းစဉ်များစမ်းသပ်နိုင်ခြင်းသူတို့ကို rendering, ရိပ်မိသက်တူရွယ်တူစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အမူအကျင့်များအခြေခံအဆင့်ဆင့်အဘို့ကိုထိန်းချုပ်ရန်ပျက်ကွက်ဖြစ်စေ။ ထို့အပြင်စာရေးသူ '' အသိပညာမရှိလေ့လာမှုများရိပ်မိသက်တူရွယ်တူစံချိန်စံညွှန်း SEIM ၏ဆိုးကျိုးများကိုသုံးပါနှင့် SNS နောက်ဆက်တွဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်ကိုအသုံးပြုဖို့ဖျန်ဖြေခြင်းရှိမရှိအကဲဖြတ်ပါပြီ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပေါင်းစည်းမှုပုံစံ၏အဓိကလုပ်ငန်းစဉ်အချို့သည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များ၏ကျားမအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဒါဟာယေဘုယျအားဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများကွဲပြားခြားနားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များဆီသို့လူမှုရေးဖြစ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသည်။ ဤလိင်ကွဲပြားမှုဆိုင်ရာလိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲမြဲမှုနှင့်ခွင့်ပြုခြင်းကိုယောက်ျားများအားချီးမွမ်းခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျိုးနွံခြင်းတို့ကိုပြဌာန်းသည့်စံနှုန်းများကိုလက်ခံခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည့် "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်ဆအဆင့်အတန်း" ဟုဖော်ပြထားသောဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းထိခိုက်စေသည်43-45] ။ အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်ဆစံ [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုယောက်ျားလေးများအဘို့မျှော်လင့်ထားပေမယ့်မိန်းကလေး၏အတည်သည်အဘယ်မှာရှိလိင်နှင့်စပ်လျဉ်းစံချိန်စံညွှန်းရေပန်းစားအကြောင်းကိုပဋိပက္ခဖြစ်ယုံကြည်ချက်, ဦးတည်သွားစေခြင်းငှါ46] ။ ကွဲပြားခြားနားသောလူမှုဆက်ဆံရေးမက်ဆေ့ခ်ျလည်း [အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေအမျိုးအစားများယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံ, သူတို့ကို process လမ်းကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနှင့်မီဒီယာအကြောင်းအရာတုံ့ပြန်စေခြင်းငှါ22, 23, 47] ။ ဥပမာ, က SEIM ကယေဘုယျအားဖြင့်မိန်းကလေးတွေလူမှု script များရေပန်းစားနှင့်အတူခြားနားသော်လည်းယောက်ျားလေးများအတွက် [, လူမှုရေးအရလက်ခံနိုင်ဖွယ်ဖြစ်မည်အကြောင်းတစ်လမ်းအတွက်လိင်ပုံနဲ့သရုပ်ဖော်ထားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ယောက်ျားလေးများ SEIM သုံးစွဲဖို့ကပိုဖွယ်ရှိနှင့်၎င်း၏အကြောင်းအရာများကလွှမ်းမိုးခံရဖို့ကပိုများပါတယ်ကြောင်းအဆိုပြုပြီးပါပြီ48] ။ ဤအအလားအလာကျား, မကွဲပြားမှုပေးထားကျနော်တို့သီးခြားစီယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအဘို့အကြှနျုပျတို့၏သမာဓိမော်ဒယ်စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။
ဒီလေ့လာမှုအတွက်ဒေတာ Project မှကြယ်ပွ, ဒတျချြမြီးကောင်ပေါက်များ၏ရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအပေါ်တစ်ဦး longitudinal သုတေသနစီမံကိန်းကို၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ အဆင့်တဆယ်မှတဆင့်ခြောက်လအတွက်ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးအဆင်ပြေနမူနာလှိုင်းတံပိုးအကြားခြောက်လကြားကာလနှင့်အတူ, လေးခုလှိုင်းတံပိုးကိုဖြတ်ပြီးတက်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးအတိုင်းတာခြင်းလှိုင်း (T-1) 2011 ၏ကျဆုံးခြင်းအတွက်ကောက်ယူခဲ့သည်။ အဆိုပါ longitudinal နမူနာ 1,297 ပါဝင်သူ (53.3% ယောက်ျားလေးများ) ၏ပါဝင်သည်။ (ဒသမတန်းကျောင်းသားပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုအဘို့, သာသတ္တမn = 1,132) ဆဋ္ဌမတန်းကျောင်းသားများကိုအားလုံးစုံစမ်းစစ်ဆေးသဘောတရားများကိုမဆံ့မခံခဲ့ပါဘူးများအတွက်မေးခွန်းလွှာအဖြစ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ T ကမှာ1, ဒီနမူနာ (52.7% ယောက်ျားလေးများ) (13.95 နှစ်ပေါင်းပျမ်းမျှအသက်ခဲ့SD = 1.18; အကွာအဝေး 11-17) ။ အများစုမှာပါဝင်သူ (79.2%) တစ်ဦးဒတျချြနောက်ခံ (ကိုယ်ပိုင်နှင့်နယ်သာလန်မှာမွေးဖွားမိဘနှစ်ပါးစလုံး) ဖြစ်. , 11.0% အခြားအနောက်တိုင်းနောက်ခံ (ကိုယ်ပိုင်သို့မဟုတ်ဥရောပတှငျမှေးဖှားမိဘတစ်ဦး, အမေရိကန်, ကနေဒါ, သြစတြေးလျ, ဒါမှမဟုတ်နယူး-နယူးဇီလန်) ရှိခဲ့နှင့် 9.8% non-အနောက်တိုင်းနောက်ခံ (ကိုယ်ပိုင်ဒါမှမဟုတ်အာဖရိကမှာမွေးဖွားမိဘတစ်ဦး, အရှေ့အလယ်ပိုင်း, အာရှခဲ့ , သို့မဟုတ် South-အမေရိကန်နိုင်ငံ) သည်။ မြီးကောင်ပေါက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 40 အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရေးအစီအစဉ်များအတွက်% နှင့်ကောလိပ်သို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်ကြိုတင်အစီအစဉ်များအတွက် 60% နှင့်အတူ, ကွဲပြားခြားနားသောပညာရေးဆိုင်ရာအပုဒ်အတွက်စာရင်းသွင်းခဲ့သည်။
သောကြောင့်တိုင်းတာခြင်း၏နေ့နဲ့ T ပြီးနောက်အတော်ကြာဒသမတန်းကျောင်းသူလေး၏ကျောင်းဆင်းပွဲအပေါ်ကျောင်းမှမရှိခြင်း၏2ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါဝင်သူအချို့ကိုအားလုံးလေးယောက်မေးခွန်းဖြည့်စွက်ပေးနိုင်ဘူး။ 1,132 သင်တန်းသားများ၏, 815 (72.0%) အားလုံးလေးယောက်လှိုင်းတံပိုးမှာ data ကိုလှူဒါန်းခဲ့သည်။ T ကမှာ1, T-2, T-3, နဲ့ T4, သင်တန်းသားများကို၏နံပါတ်အသီးသီး 1,066 (94.2%), 1,047 (92.5%), 1,010 (89.2%), နဲ့ 925 (81.7%), ဖြစ်ခဲ့သည်။ အားလုံးမေးခွန်းပြီးစီးခဲ့သောသူသင်တန်းသားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်ဦးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုတိုင်းတာခြင်းလှိုင်းတံပိုးလွဲချော်တဲ့သူသင်တန်းသားများကိုပိုပြီးမကြာခဏယောက်ျားလေးများဖြစ်ကြသည်, χ² (1, N = 1,132) = 10.21, p = .001, အဟောင်းတွေ, t(503.21) = -6.71, p <.001, နိမ့်ပညာရေးအဆင့်ဆင့်စာရင်းသွင်း, χ² (1, N = 1,065) = 66.80, p <.001, နှင့်မကြာခဏအနောက်တိုင်းမဟုတ်သောနောက်ခံရှိခဲ့ပါတယ်, χ² (1, N = 1,132) = 12.55, p <.001 ထို့အပြင်သူတို့သည် SEIM အသုံးပြုမှုပိုမိုမြင့်မားကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ t(314.96) = -5.00, p <.001, မိန့်ခွန်းများနှင့်ဖော်ပြရန်သက်တူရွယ်တူစံနှုန်းများ, tတရားရုံးမိန့်(363.54) = -8.55, p <.001 အသီးသီး tဖော်ပြရန်(342.64) = -8.26, p <.001 နှင့်လိင်အတွေ့အကြုံ, t(295.59) = -8.04, p <.001, လေ့လာမှုရဲ့ start မှာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာ - ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်း (သတင်းအချက်အလက်အပြည့်အဝဖြစ်နိုင်ခြေ၊ ပျောက်ဆုံးနေသောအချက်အလက်များကိုကိုင်တွယ်ရန်ဘုံလုပ်ထုံးလုပ်နည်း) တွင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပျောက်ဆုံးသောအချက်အလက်များပါ ၀ င်သည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုပြည့်စုံသောနမူနာအပေါ်အခြေခံသည်။49].
မြီးကောင်ပေါက်မြို့ကြီးများတွင်နှင့်နယ်သာလန်တစ်လျှောက်လုံးသေးငယ်တဲ့မြူနီစီပယ်အတွက်ကျောင်းများအနေဖြင့်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ ကျောင်းများကျပန်းချဉ်းသေးရည်ရွယ်ချက်နယ်သာလန်၏ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများကနေရှေးခယျြခဲ့သညျ။ စိတ်ဝင်စားကျောင်းများလေ့လာမှုရည်မှန်းချက်များနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမိတ်ဆက်နှင့်ကရှင်းပြသည်ခဲ့ပြီးသောစဉ်အတွင်းကျောင်းအုပ်ကြီးနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်ရေးအစည်းအဝေး, များအတွက်သုတေသီများခြင်းဖြင့်သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်လေးအလယ်တန်းကျောင်းများပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။ ကျောင်းအုပ်နှင့်သုတေသီများပါဝင်မှုအတွက်ရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကျောင်းအတွင်းပေးသောအတန်းအတူတူဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
မတိုင်မီကပထမဦးဆုံးတိုင်းတာခြင်းရန်, နှစ်ဦးစလုံးသည်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်၎င်းတို့၏မိဘများလေ့လာမှုနှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်ပါဝင်မှုကျဆင်းသို့မဟုတ်အဆုံးသတ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေ၏ရည်ရွယ်ချက်ဖော်ပြအက္ခရာများ, လက်ကမ်းစာစောင်နှင့် Flyer ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ မိဘများကသူတို့ကလေးက (ထိုချဉ်းကပ်မိဘများ၏ 6.9% ပြု) ကိုလေ့လာမှုအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူခွင့်မပြုခဲ့ကွောငျးကိုညွှန်းလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပုံစံများကိုပြန်လာနိုင်ပါတယ်။ passive အကြောင်းကြားမိဘသဘောတူခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူမြီးကောင်ပေါက်ပါဝင်မှုမိမိဆန္ဒအလျောက်ခဲ့ကြပြီး (0.1% ပြု) ကိုလေ့လာမှုအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူရန်ဆန္ဒရှိမပြုခဲ့ပါလျှင်သူတို့စာသင်ခန်းသို့မပြန်နိုင်ကြောင်းကိုအသီးအသီးတိုင်းတာခြင်းအခါသမယမှာရဖို့သေချာခဲ့သည်။
တစ်ဦးချင်းစီလှိုင်းမှာမြီးကောင်ပေါက်ပုံမှန်ကျောင်းချိန်အတွင်းမှာကျောင်းတွင်ကွန်ပျူတာ-based, ဒတျချြမေးခွန်းလွှာပြီးစီးခဲ့သည်။ သုတေသီများနှင့်လေ့ကျင့်သင်ကြားသုတေသနလက်ထောက် (ဆိုလိုသည်မှာစီမံကိန်းနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမိတ်ဆက်ပေး, မေးခွန်းများကိုဖြေနှင့်ဆရာ, ဆရာမများနှင့်အခြားကျောင်းသားများအနေဖြင့်အများဆုံး privacy ကိုသေချာစေရန်) ကိုဒေတာစုဆောင်းခြင်းကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန်စည်းဝေးကြ၏။ ဆရာဒေတာစုဆောင်းခြင်းစဉ်အတွင်းစာသင်ခန်းထဲမှာလက်ရှိကြဘူး။ မည်သည့်အချိန်တွင်မပါဝင်မှုကိုရပ်တန့်ရန် option ဖြစ်သကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှု၏လျှို့ဝှက်ချက်များ, အာမခံခဲ့သည်။ မြီးကောင်ပေါက်အသီးအသီးပြီးစီးခဲ့မေးခွန်းလွှာပြီးနောက်တိုးမြှင့်တန်ဖိုးစာအုပ်လက်ဆောင်တစ်ခုလက်မှတ်များကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုဒီလေ့လာမှုမှာကိစ္စများကိုရည်မှတ်မည်သည့်ပြဿနာမျှသို့မဟုတ်မေးခွန်းများကိုရှိသင့်အနေနဲ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ protocol ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ Utrecht တက္ကသိုလ်များ၏လူမှုဌာနနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာသိပ္ပံ၏ကျင့်ဝတ်ဘုတ်အဖွဲ့အားလုံးလေ့လာမှုနဲ့သဘောတူညီခကျြလုပျထုံးလုပျနညျးအတည်ပြုခဲ့သည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူအတွေ့အကြုံ (T-1 နဲ့ T4)
"? သင်သည်အစဉ်အပြင်သစ်တစ်စုံတစ်ယောက်နမ်းဖူး" နှင့် "သငျသညျအစဉျအမွဲအခြားသူတစ်ဦးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူး: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူမြီးကောင်ပေါက် '' အတွေ့အကြုံကိုအကဲဖြတ်ရန်, သင်တန်းသားများကိုစပိုင်းတွင်မေးခွန်းနှစ်ခုမေးမွနျးခဲ့ကြသလဲ လိင်အားဖြင့်ငါတို့သည်ထိသို့မဟုတ် caressing ကနေလိင်ဆက်ဆံဖို့အရာအားလုံး, "(0 = ဘယ်သူမျှမက, 1 = ဟုတ်ကဲ့) ကိုဆိုလိုတာ။ အဝတ်အချည်းစည်းထိထိမိမိသို့မဟုတ်ခြော့, လက်စွဲစာအုပ်လိင်ဖျော်ဖြေသို့မဟုတ်လက်ခံရရှိ, ပါးစပ်လိင်ဖျော်ဖြေသို့မဟုတ်လက်ခံရရှိနှင့်အင်္ဂါဇာတ်သို့မဟုတ်စအိုလိင်ဆက်ဆံ (0 = ဘယ်သူမျှမက, 1 =: ကွဲပြားခြားနားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အတွေ့အကြုံကိုအကြောင်းကိုနောက်ဆက်တွဲမေးခွန်းများကိုလက်ခံရရှိသောဒုတိယမေးခွန်းအပေါ်ဟုတ်ကဲ့ညွှန်ပြသူများသည် ဟုတ်ကဲ့) ။ အဆိုပါနမ်းခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပစ္စည်းများအားလုံးငါးအပြုအမူတွေနဲ့အတူ0= အသုံးမပြုဘူးသေးသောလူများအနေဖြင့်ငါးအပြုအမူတွေ (Cronbach ရဲ့αနှင့်အတူ5= အတွေ့အကြုံအထိ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူမြီးကောင်ပေါက် '' အတွေ့အကြုံအဆင့်ကိုတိုင်းတာတစျခု variable ကိုသို့ပေါင်းစပ်ခဲ့သည်T1 = .78; αT4 = .86) ။
လိင်-related အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေ (T-1)
SEIM ကိုအသုံးပြုပါ။ အထိခိုက်မခံမေးခွန်းတွေအသုံးအနှုန်းအပေါ်သုတေသနပြုအပေါ်အခြေခံပြီး [50အောက်ပါအတိုင်း] မြီးကောင်ပေါက် '' SEIM အသုံးပြုမှုကိုအကဲဖြတ်ခဲ့သည်: "အတော်များများကဆယ်ကျော်သက်တခါတရံအင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းမှာကြည့်ပါ။ ကျနော်တို့ဤသူသည်သင်တို့အဘို့ဖြစ်၏ဘယ်လိုသိရန်လိုသည်။ မကြာခဏဘယ်လိုသင်တစ်ဦးညစ်ညမ်းဆိုဒ် (ဗလာသို့မဟုတ်လိင်ဆက်ဆံလူတွေကိုပြသသောရုပ်ပုံများသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်နှင့်အတူ website တစ်ခု) ကြည့်ရှုရန်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုကြတာလဲ? "ဤအရာအတွက်တုံ့ပြန်မှုအမျိုးအစား 1 =,2=,3တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ထက်လျော့နည်း = ဘယ်တော့မှမခံခဲ့ရ တစ်လတစ်ကြိမ်ထက်လျော့နည်း,4= တစ်ခုမှာတစ်လကြိမ်မှသုံး,5= တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်တစ်ပါတ်,6= သုံးကြိမ်တစ်ပါတ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို။
SNS ကိုအသုံးပြုပါ။ SNSs ၏မြီးကောင်ပေါက် '' အသုံးပြုမှုကိုသူတို့တက်ကြွစွာသူတို့ရဲ့တဲ့လူသုံးအများဆုံးလူမှုကွန်ရက် site ပေါ်တွင်နေ့တိုင်းသုံးစွဲမည်မျှအချိန်သင်တန်းသားများကိုကိုတောင်းတိုင်းတာခဲ့သည်။ တုန့်ပြန်အမျိုးအစား0= မတစ်ဦး SNS အဖွဲ့ဝင် 1 15 မိနစ်ထက် = Less,2= 15-30 မိနစ်3= 30-60 မိနစ်4= 1-2 နာရီ,5= 3-4 နာရီ ရှိ. ,6ထက်ပို =4နာရီ။
ရိပ်မိသက်တူရွယ်တူစံချိန်စံညွှန်း (T-1 နဲ့ T3)
တရားရုံးမိန့်စံချိန်စံညွှန်း။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ခွင့်ပြုချက်မြီးကောင်ပေါက် '' သူတို့ရဲ့ရွယ်တူ၏သဘောထားအမြင် '[ယခင်ကလိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မိဘခွင့်ပြုချက်အကဲဖြတ်ရန်ဖို့အသုံးပြုတစ်ဦးကို item တစ်ခုအဆင်ပြေအောင်ဗားရှင်းနဲ့တိုင်းတာခဲ့ကြ51] ။ "ငါ့အကိုအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေများကယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်အရွယ်သေးလိင်ရှိသည်မဟုတ်သင့်ကြောင်းယုံကြည်" ဟုခြောက်မှတ်စကေး (1 = လုံးဝမဟုတ်စစ်မှန်တဲ့,6= လုံးဝမှန်) ပေါ်တွင်သွင်းယူ: ဒီပစ္စည်းကိုဖတ်ပါ။ မြင့်မားရမှတ်မြီးကောင်ပေါက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပိုမိုခွင့်ပြုချက်ဖြစ်သူတို့၏ရွယ်တူချင်းရိပ်မိကြောင်းညွှန်ပြနိုင်အောင်ရမှတ်များ, ပြောင်းပြန်ခဲ့ကြသည်။
ဖော်ပြရန်စံချိန်စံညွှန်း။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူအတွေ့အကြုံကိုမြီးကောင်ပေါက် '' သူတို့ရဲ့ရွယ်တူ၏သဘောထားအမြင် '' မိတ်ဆွေအချိုးအစားနှငျ့ပတျသကျသောသုံးပစ္စည်းများနှင့်အတူတိုင်းတာခဲ့ကြသည် [အတွေးပြင်သစ်နမ်း, လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်အတူအတှေ့အကွုံခဲ့တ-ညဥ့်ရပ် adolescents52,53] ငါ၏အဆွေ၏ထက်ဝက်ထက် = Less 12နီးပါးငါ့အလိုရှိသမျှ၏ =,3ပိုငါ၏အဆွေ၏ထက်ဝက်ထက် =,4သူငယ်ချင်း = သာလျှင်အနည်းငယ်,5သူငယ်ချင်း = အဘယ်သူမျှမ (ကခြောက်မှတ်စကေးအပေါ်သွင်းယူ သူငယ်ချင်း 6) သူငယ်ချင်းတွေအားလုံး = ။ တစ်ဦးကပေါင်းစပ်ရမှတ်ဤပစ္စည်းများကိုပေါ်ရမှတ်ပျမ်းမျှအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့ပါတယ် (αT1 = .72; αT3 = .73) ။
အတွက်တင်ပြအဆိုပါအယူအဆရေးရာမော်ဒယ် သင်္ဘောသဖန်း 1 Mplus (ဗားရှင်း 7.2 အတွက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းမော်ဒယ်ကို အသုံးပြု. စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့သည်; ) ။ ကျနော်တို့နှစ်ဦးကိုမော်ဒယ်များ, SEIM သုံးပါနှင့် SNS အသုံးပြုမှုအပါအဝင်တဦးတည်းအပါအဝင်တဦးတည်းခန့်မှန်းပါတယ်။ လိင်-related အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေကိုအခြေခံ (T-မှာတိုင်းတာခဲ့ကြသည်1); ရိပ်မိသက်တူရွယ်တူစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူအတွေ့အကြုံကိုအခြေခံမှာ 12 (T ကမှာနှစ်ဦးစလုံးတိုင်းတာခဲ့ကြသည်3) နှင့် 18 (T-4) လအတွင်းနောက်ဆက်တွဲအသီးသီး။ လိင်-related အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုအောက်ပါသက်တူရွယ်တူစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၌ဤလမ်း, အမှန်တကယ်ကျော်အချိန်ပြောင်းလဲမှုအကဲဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ထိန်းချုပ်မှု variable ကိုနှင့်မော်ဒယ်များသီးခြားစီယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအဘို့ခန့်မှန်းခဲ့ကြသည်အဖြစ်ခေတ်ဟာမော်ဒယ်များတွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ [ပုံမှန်ယူဆချက်ကိုချိုးဖောက်ကြသောအခါဒီအဓိပ်ပာယျစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်အတူပြဿနာများလျော့ချအဖြစ်မော်ဒယ်များခန့်မှန်းဖို့ bootstrap လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုအသုံးပြု55] -a လိင်သုတေသနအတွက်ပုံမှန်ဖြစ်ရပ်ဆန်း။ ကျနော်တို့ 1,000 bootstrap နမူနာရယူအပေါင်းတို့နှင့်တကွတွေးဆသက်ရောက်မှုများအတွက် 95% ဘက်လိုက်မှု-တညျ့ယုံကြည်မှုကြားကာလခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဤအကြားကာလတန်ဖိုးကိုသုညမပါဝင်ပါဘူးလျှင်, ခန့်မှန်းခြေအကျိုးသက်ရောက်မှုသိသာသည်။ ကျနော်တို့သာနှစ်ဦးစလုံးသည်၎င်း၏လျှင်အဖြစ်သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုစဉ်းစား p-value နှင့်၎င်း၏ 95% ဘက်လိုက်မှု-တညျ့ယုံကြည်မှုကြားကာလသုညကနေတစ်ဦးကစာရင်းအင်းသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ညွှန်ပြ။ မော်ဒယ်ကိုက်ညီတဲ့အတွက်နှိုင်းယှဉ်နဲ့ Fit ညွှန်းကိန်း (CFI) နှင့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် (RMSEA) ၏အမြစ်ပေမဲ့ရင်ပြင်မှားယွင်းနေသည်နှင့်အတူအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ .90 နှင့် .08 ထက်လျော့နည်း RMSEAs ထက် သာ. ကြီးမြတ် CFIs [အနေနဲ့လုံလောက်တဲ့မော်ဒယ်မထိုက်မတန်၏သက်သေသာဓကအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ကြ56].
မြီးကောင်ပေါက် '' SEIM အသုံးပြုခြင်းနှင့် SNS အသုံးပြုမှုကိုဟောကိန်းထုတ်, သက်တူရွယ်တူခွင့်ပြုချက်နှင့်လှုပ်ရှားမှုတိုးလာသဘောထားအမြင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (H5) နဲ့အတှေ့အကွုံတိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့်ကတဆင့်ကျနော်တို့ထုတ်ကုန်-of ကိန်းနည်းလမ်းနှင့်အတူနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့သွယ်ဝိုက်သက်ရောက်မှု၏အရေးပါမှုကိုအကဲဖြတ်ခြင်းရှိမရှိခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ [54, 57].
သော့ကို variable တွေကိုအဘို့အဖော်ပြရန်စာရင်းဇယားများတွင်ပြသနေကြသည် စားပွဲတင် 1။ ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအဘို့သိသိသာသာကွဲပြားလိင်-ဆက်စပ်အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေ: ယောက်ျားလေးများမိန်းကလေးငယ်များ SNSs အပေါ်တစ်နေ့လျှင်အချိန်ပိုမိုသုံးစွဲသော်လည်း, မိန်းကလေးများထက် ပို. မကြာခဏ SEIM အသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံထားသည်။ ရိပ်မိသက်တူရွယ်တူစံချိန်စံညွှန်းနှင့် ပတ်သက်. နှင့်အတူ, ယောက်ျားလေးနှစ်ဦးစလုံးအခြေခံမှာရွယ်တူ၏အတည်ပြုနှင့်မိန်းကလေးများထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ပါဝငျခဲ့အားကောင်းသဘောထားအမြင်, အစီရင်ခံရန်တွေ့ရှိခဲ့သည် (T-1) နှင့် 12 လအတွင်းနောက်ဆက်တွဲ (T ကမှာ3) ။ Pairwise t စမ်းသပ်မှုများထပ်မံနှစ်ဦးစလုံးယောက်ျားလေးများ '' နှင့်မိန်းကလေးများ '' အတွက်ဤသက်တူရွယ်တူစံချိန်စံညွှန်းကိုသိသိသာသာ 12 လကြားကာလ (ယောက်ျားလေးများကျော်တိုးလာသည်ဟုသရုပ်ပြ: tတရားရုံးမိန့်(474) = -10.63, p <.001, tဖော်ပြရန်(413) = -4.96, p <.001; မိန်းကလေးများ: tတရားရုံးမိန့်(453) = -8.80, p <.001, tဖော်ပြရန်(417) = -6.99, p <.001) ။ မိန်းကလေးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကယောက်ျားလေးများအတွက်လိင်အပြုအမူဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏အခြေခံအဆင့်သည်အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ သို့သော်ဒီခြားနားချက်ကို T မှာမရှိတော့သိသာဖြစ်ခဲ့သည်4။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူအတွေ့အကြုံယောက်ျားလေးများ '' နှင့်မိန်းကလေးများ '' အဆင့်အထိ T ကအကြား 18 လကာလအတွင်းတိုးလာ1 နဲ့ T4 (ယောက်ျားလေးများ: t(434) = -9.69, p <.001; မိန်းကလေးများ: t(437) = -10.44, p <.001) ။ စားပွဲတင်2သမာဓိမော်ဒယ်တွင်ထည့်သွင်းအဆိုပါ variable တွေကိုများ၏ဆက်စပ်မှုကိန်းပြသထားတယ်။ ဒီစားပွဲအဖြစ်ရှိုးများ, လိင်-related အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေ, ရိပ်မိသက်တူရွယ်တူစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူအတွေ့အကြုံကိုအားလုံးအပြုသဘောဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည် (မိန်းကလေးများ '' SEIM အသုံးပြုမှုခြွင်းချက်နဲ့ T နှင့်အတူ3 တရားရုံးမိန့်စံချိန်စံညွှန်း) ။
Boys များနှင့်မိန်းကလေးများအဘို့သမာဓိမော်ဒယ်အတွက် Key ကို Variables ကိုများအတွက်ဖော်ပြရန်စာရင်းအင်းများ။
Boys များနှင့်မိန်းကလေးများအဘို့သမာဓိမော်ဒယ်အတွက် Key ကို Variables ကိုအကြား Pearson Correlate ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကန ဦး ပုံစံများသည်လုံလောက်သောကိုက်ညီမှုကိုပြခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ (ဆိုလိုသည်မှာအားလုံးသည် RMSEAs> .10) ။ ပြုပြင်မွမ်းမံမှုညွှန်းကိန်းများကိုစစ်ဆေးခြင်းကအချက်အလက်များ၏အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်ပုံစံများတွင်နောက်ထပ်လမ်းကြောင်းနှစ်ခုကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ အထူးသ (1) T ကနေလမ်းကြောင်းထည့်သွင်း1 T ကမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ3 ဖော်ပြရန်စံချိန်စံညွှန်းနှင့် (2) T-1 T ကမှဖော်ပြရန်စံချိန်စံညွှန်း3 တရားရုံးမိန့်စံချိန်စံညွှန်းလက်ခံနိုင်ဖွယ်မထိုက်မတန်, CFIs ≥ .99 နှင့်အတူမော်ဒယ်အတွက်ရလဒ်; RMSEAs .08 ≤။ နောက်ဆုံး SEIM များအတွက်မော်ဒယ်များကိုသုံးပါနှင့် SNS အသုံးပြုမှုသင်္ဘောသဖန်းသီးအတွက်တင်ပြကြသည် Figs22 နှင့် and3,3အသီးသီး။ အဆိုပါယူဆချက်များအတွက်အများဆုံးစိတ်ဝင်စားမှုဤကိန်းဂဏန်းများကိုသာလက်ရှိကိန်းများနှင့်သီအိုရီအဖော်ပြထားဆက်ဆံရေး၏ရလဒ်များကိုအလေးပေးရန်။ ကျန်ရှိနေသေးသောတွင်တစ်ပြိုင်တည်းအသင်းအဖွဲ့များဖြစ်ကြအဖြစ် key ကို variable တွေကိုပေးရန် covariates (အသက်နှင့်သက်တူရွယ်တူစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏အခြေခံအဆင့်ဆင့်) မှတိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုသည်ကိန်းဂဏန်းကနေဖယ်ထုတ်လိုက်ကြသည်။ (က) SEIM နှင့်အတူအသက် T ကမှ (မိန်းကလေးများ), (ခ) SNS နှင့်အတူအသက် (ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများ) ကိုသုံး, (ဂ) အသက်အရွယ်ကိုအသုံးပြုဖို့: ဤလမ်းကြောင်း၏ချွင်းချက်နှင့်အတူ, အပြုသဘောနှင့်အများအားဖြင့်သိသာထင်ရှားသောခဲ့ကြသည်3 T ကမှဖော်ပြရန်စံချိန်စံညွှန်း (ယောက်ျားလေးများ), (ဃ) အသက်အရွယ်4 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများ); Non-သိသာထင်ရှားသောဆိုးကျိုးများအနေဖြင့်အရွယ်ရှိ B = 0.03 (β = .02) မှ B = 0.09 (β = .08) ။ သမာဓိမော်ဒယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူအတွေ့အကြုံအဆင့်ယောက်ျားလေးများ '' မိန်းကလေးတွေအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူအတွေ့အကြုံနှင့် 59% နှင့်ကှဲလှဲ၏ 61% ၏အဆင့်ကို '' အတွက်ကှဲလှဲ၏ 50% နှင့် 51% အဘို့မှတ်။
: Hypothesis 1a အတွက်ဟောကိန်းထုတ်ထားတဲ့အတိုင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူပိုပြီးအခြေခံအတွေ့အကြုံကိုသူဆယ်ကျော်သက်ပိုပြီးမကြာခဏ SEIM အသုံးပြုမှု (ယောက်ျားလေးများသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည် B = 0.92, β = .43, p <.001, ဘီစီ 95% CI [0.71, 1.15]; မိန်းကလေးများ: B = 0.10, β = .23, p 008% CI [95, 0.03] ဘီစီ = .0.18,) ။ ထိုမှတပါး, Hypothesis 1b နှင့်အညီ, လေ့လာမှုရဲ့ start မှာလိင်အတွက်ပိုပြီးရိပ်မိ၏သက်တူရွယ်တူခွင့်ပြုချက်နှင့်သက်တူရွယ်တူထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဖော်ပြခဲ့သည်သူကိုမြီးကောင်ပေါက်ကိုပိုမိုမကြာခဏ (ယောက်ျားလေးများ SEIM အသုံးပြုသော: Bတရားရုံးမိန့် = 1.43, β = .46, p <.001, ဘီစီအီး 95% CI [၁.၁၈၊ ၁.၆၉]၊ Bဖော်ပြရန် = 0.89, β = .43, p <.001, ဘီစီ 95% CI [0.70, 1.08]; မိန်းကလေးများ: Bတရားရုံးမိန့် = 0.10, β = .14, p = .002, ဘီစီ 95% CI [0.05, 0.18] Bဖော်ပြရန် = 0.07, β = .15, p 002% CI [95, 0.03] ဘီစီ = .0.11,) ။ အလားတူပုံစံများ Hypothesis 1c (ယောက်ျားလေးများအတည်ပြု, SNS အသုံးပြုရန်တွေ့ရှိခဲ့သည်: B = 0.49, β = .26, p <.001, ဘီစီ 95% CI [0.30, 0.68]; မိန်းကလေးများ: B = 0.34, β = .24, p <.001, ဘီစီအီး 95% CI [0.21, 0.50]) နှင့် Hypothesis 1d (ယောက်ျားလေးများ - Bတရားရုံးမိန့် = 0.63, β = .23, p <.001, ဘီစီအီး 95% CI [၁.၁၈၊ ၁.၆၉]၊ Bဖော်ပြရန် = 0.54, β = .29, p <.001, ဘီစီ 95% CI [0.37, 0.69]; မိန်းကလေးများ: Bတရားရုံးမိန့် = 0.59, β = .25, p <.001, ဘီစီအီး 95% CI [၁.၁၈၊ ၁.၆၉]၊ Bဖော်ပြရန် = 0.54, β = .37, p <.001, ဘီစီ 95% CI [0.41, 0.70]) ။
hypothesis 2a ပိုပြီးမကြာခဏ SEIM အသုံးပြုမှုကိုတိုက်ရိုက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူအတွေ့အကြုံတိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့်ခန့်မှန်းမယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ : ဒီအယူအဆ (ယောက်ျားလေးများပယ်ချခံရဖို့ခဲ့ B = 0.08, β = .08, p = .120, ဘီစီ 95% CI [-0.03, 0.17]; မိန်းကလေးများ: B = 0.10, β = .03, p 647% CI [-95, 0.36] ဘီစီ = .0.46,) ။ hypothesis 2b ပို. မကြာခဏ SNS အသုံးပြုမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူအတွေ့အကြုံတိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့်ဦးတည်သွားစေလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်း, (ယောက်ျားလေးများယောက်ျားလေးများများအတွက်ထောက်ခံမှုရရှိခဲ့: B = 0.16, β = .14, p <.001, ဘီစီ 95% CI [0.08, 0.23]; မိန်းကလေးများ: B = 0.08, β = .07, p 099% CI [-95, 0.02] ဘီစီ = .0.17,) ။ ပိုများသောမကြာခဏ SNS နောက်ပိုင်းမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ 18 လအတွင်းနှင့်အတူအတွေ့အကြုံယောက်ျားလေးများ '' အဆင့်အတွက်ဟောကိန်းထုတ်တိုးကိုသုံးပါ။
ယူဆချက် 3a နှင့် 3b ပိုပြီးမကြာခဏ SEIM အသုံးပြုမှုရွယ်တူ၏အတည်ပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံလျက်ရှိသောဆယ်ကျော်သက် '' သညာကိုတိုးမြှင့်မယ်လို့ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ ဤရွေ့ကား Over-အချိန်သက်ရောက်မှုအမှန်ပင်ယောက်ျားလေးများသာ (ယောက်ျားလေးများအဘို့ဆိုသော်ငြားတွေ့ရှိခဲ့သည်: Bတရားရုံးမိန့် = 0.10, β = .10, p = .020, ဘီစီ 95% CI [0.10, 0.18] Bဖော်ပြရန် = 0.08, β = .10, p = .028, ဘီစီ 95% CI [0.01, 0.15]; မိန်းကလေးများ: Bတရားရုံးမိန့် = -0.15, β = -.04, p = .425, ဘီစီ 95% CI [-0.56, 0.20] Bဖော်ပြရန် = -0.09, β = -.04, p 479% CI [-95, 0.32] ဘီစီ = .0.21,) ။ ပိုပြီးမကြာခဏ SNS အသုံးပြုမှုရွယ်တူ၏အတည်ပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံလျက်ရှိသောဆယ်ကျော်သက် '' သညာတိုးမြှင့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားတဲ့ယူဆချက် 3c နှင့် 3d, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ SNS သူတို့ရဲ့တရားရုံးမိန့်စံချိန်စံညွှန်းအတွက်သာဆိုနိုင်သည်သူတို့ရဲ့ဖော်ပြရန်စံချိန်စံညွှန်း (ယောက်ျားလေးများအတွက်ဟောကိန်းထုတ်တိုးကိုအသုံးပြုဖို့အထူးယောက်ျားလေးများ '' မိန်းကလေးများအတွက်သော်လည်း SNS, 12 လအကြာမှာသူတို့ရဲ့မိန့်များနှင့်ဖော်ပြရန်စံချိန်စံညွှန်းအတွက်ဟောကိန်းထုတ်တိုးကိုသုံးပါ ': Bတရားရုံးမိန့် = 0.17, β = .14, p <.001, ဘီစီအီး 95% CI [၁.၁၈၊ ၁.၆၉]၊ Bဖော်ပြရန် = 0.08, β = .10, p = .010, ဘီစီ 95% CI [0.02, 0.15]; မိန်းကလေးများ: Bတရားရုံးမိန့် = 0.15, β = .12, p = .003, ဘီစီ 95% CI [0.05, 0.25] Bဖော်ပြရန် = 0.07, β = .09, p 051% CI [95, 0.00] ဘီစီ = .0.15,) ။
ယူဆချက် 4a နှင့် 4b အတွက်မျှော်မှန်းထားသည့်အတိုင်းလိင်နှင့်စပ်လျဉ်းရိပ်မိသက်တူရွယ်တူစံချိန်စံညွှန်းအပြုသဘောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူမြီးကောင်ပေါက် '' အတွေ့အကြုံကိုခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ ယောက်ျားလေးများသည်, ရွယ်တူလိင်မြားတှငျပါဝငျခွငျးဖြစ်ကြောင်းအားကောင်းသဘောထားအမြင် (ခြောက်လအကြာမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူအတွေ့အကြုံတိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့်ခန့်မှန်းBဖော်ပြရန် = 0.29, β = .23, p <.001, ဘီစီ 95% CI [0.17, 0.45]); သို့သော်နောက်ဆက်တွဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်တရားရုံးမိန့်စံချိန်စံညွှန်းများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမရောက်ရှိခဲ့ပါဘူး (Bတရားရုံးမိန့် = 0.05, β = .05, p 211% CI [-95, 0.02] ဘီစီ = .0.13,) ။ မိန်းကလေးများအဘို့, ရွယ်တူ၏အတည်ပြုခြင်းနှင့်လိင်မြားတှငျပါဝငျခွငျးဖြစ်ကြောင်းအားကောင်းသဘောထားအမြင်ခြောက်လအကြာမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူတိုးပွားလာအတွေ့အကြုံကိုဟောကိန်းထုတ် (Bတရားရုံးမိန့် = 0.16, β = .19, p <.001, ဘီစီအီး 95% CI [၁.၁၈၊ ၁.၆၉]၊ Bဖော်ပြရန် = 0.18, β = .13, p 022% CI [95, 0.03] ဘီစီ = .0.35,) ။ (ဤခန့်မှန်းချက်ကတော့ SNS မော်ဒယ်များမှဆင်းသက်လာကြသည် ဖြစ်. SEIM မော်ဒယ်ကနေခန့်မှန်းအနည်းငယ်ကွဲပြားစေခြင်းငှါပေမယ့်ကောက်ချက်ပြောင်းလဲပစ်ကြဘူး။ )
အထက်ပါတွေ့ရှိချက်များ၏အခြေခံတွင်ကျနော်တို့လိင်-related အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေကိုသွယ်ဝိုက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူမြီးကောင်ပေါက် '' အတွေ့အကြုံကိုတိုးမြှင့်စေခြင်းငှါအရာမှတဆင့်သုံးကွဲပြားခြားနားသောလမ်းကြောင်းအကဲဖြတ်။ ဖော်ပြရန်စံချိန်စံညွှန်းတဆင့်နောက်ဆက်တွဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်ယောက်ျားလေးများ '' SEIM အသုံးပြုမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကိုယ်စားပြုထားတဲ့ပထမဦးဆုံးလမ်းကြောင်း, အဘို့, သွယ်ဝိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှု (အရေးပါမှုကိုမရောက်နိုင်ဘူးB = 0.02, β = .03, p 066% CI [95, 0.00] ဘီစီ = .0.06,) ။ သို့သော်ဖော်ပြရန်စံချိန်စံညွှန်းတဆင့်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်ယောက်ျားလေးများ '' SNS အသုံးပြုမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကိုယ်စားပြုဒုတိယလမ်းကြောင်း, အဘို့, သွယ်ဝိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှု (သိသာထငျရှားလေB = 0.03, β = .02, p 031% CI [95, 0.01] ဘီစီ = .0.05,) ။ အလားတူပင်မိန်းကလေးငယ်များ '' SNS ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဖွဲ့စည်းရန်တတိယလမ်းကြောင်းအတွက်ရလဒ်, တရားရုံးမိန့်စံချိန်စံညွှန်းတဆင့်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်ကိုသုံးသိသိသာသာသွယ်ဝိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှု (ပြသB = 0.03, β = .02, p 018% CI [95, 0.01] ဘီစီ = .0.05,) ။ ဒါကွောငျ့ယူဆချက် 5c နှင့် 5d နှင့်အညီ, SNS အသုံးပြုမှုရွယ်တူရွယ်တူမိန်းကလေးများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏အတည်ပြုဖြစ်ကြောင်းယောက်ျားလေးများနှင့်သဘောထားအမြင်အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံလျက်ရှိသောသဘောထားအမြင်တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူအတွေ့အကြုံတိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့်ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။
ပိုကောင်းတဲ့လိင်-related အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေနဲ့သက်တူရွယ်တူလွှမ်းမိုးမှု interrelate ဘယ်လိုနားလည်နှင့်မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖှံ့ဖွိုးတိုးတပုံဖော်အတွက်ပေါင်းစပ်ဖို့ Integrated ချဉ်းကပ်ယူရည်ရွယ်ပြီးလက်ရှိလေ့လာမှု။ အထူးသကျနော်တို့ဘယ်လိုလက်ခံ (ဆိုလိုသည်မှာ SEIM ကိုသုံးပါ) နှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု (ဆိုလိုသည်မှာ, SNS အသုံးပြုမှု) လိင်-related အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူအတွေ့အကြုံမြီးကောင်ပေါက် '' အဆင့်ကိုခန့်မှန်းအတွက်ရိပ်မိသက်တူရွယ်တူစံချိန်စံညွှန်းနှင့်ဆက်စပ်နေပါသည်ရှင်းပြထားတဲ့ Integrated မော်ဒယ်စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်အများအပြားနည်းလမ်းမြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လိင်-related အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေ၏အခန်းကဏ္ဍကို ပတ်သက်. စာပေမှလှူဒါန်းခဲ့သည်။ ပထမဦးစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုလိင်-related အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေကိုအမှန်တကယ်သက်တူရွယ်တူဒိုမိန်းအတွက်လိင်-related ဖြစ်စဉ်များနှင့်အတူ ခွဲခြား. မရဘဲချိတ်ဆက်ဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အထူးသ, ပိုမိုမကြာခဏ SEIM အသုံးပြုခဲ့သူ SNSs အပေါ်အချိန်ပိုမိုသုံးစွဲခဲ့သူမြီးကောင်ပေါက်လည်း (ဆိုလိုသည်မှာဖော်ပြရန်စံချိန်စံညွှန်း) (ဆိုလိုသည်မှာတရားရုံးမိန့်စံချိန်စံညွှန်း) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏အတည်ပြုခံရဖို့သူတို့ရဲ့ရွယ်တူချင်းရိပ်မိဖို့နဲ့လိင်တက်ကြွဖြစ်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိကြ၏. ထိုမှတပါး, နှစ်ဦးစလုံးမြီးကောင်ပေါက် '' လိင်-related အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ရိပ်မိသက်တူရွယ်တူစံချိန်စံညွှန်းတစ်ပြိုင်နက်တည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူအတွေ့အကြုံမြင့်မားတဲ့အဆင့်အတန်းနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်များ၏တစ်ဦးကစက္ကန့်အလှူငွေကိုသူတို့လိင်-related အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူမြီးကောင်ပေါက် '' အတွေ့အကြုံကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းထားတဲ့မှတဆင့်ကွဲပြားခြားနားသောလမ်းကြောင်းသရုပျဖျောသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ကျွန်ုပ်တို့၏မော်ဒယ်ယောက်ျားလေးများကြားတွင်, SNSs သုံးစွဲအချိန်ပိုမိုတိုက်ရိုက် 18 လကြာပြီးနောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူအတွေ့အကြုံတိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့်ခန့်မှန်းကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဤသည်ကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မိန်းကလေးများအဘို့မတွေ့ရှိခဲ့သည်ပျမ်းမျှမိန်းကလေးငယ်များအပေါ်ပိုပြီးမကြာခဏ SNS အသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံသောတွေ့ရှိချက်ရှိနေသော်လည်း။ ထို့အပြင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူ၎င်းတို့၏နောက်ဆက်တွဲအတွေ့အကြုံအပေါ်မြီးကောင်ပေါက် '' SEIM အသုံးပြုမှုကိုအဘယ်သူမျှမကိုတိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်လိင်-related အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေကိုအထူးသဖြင့်လိင်ဆီသို့သက်တူရွယ်တူစံချိန်စံညွှန်းများဟာသူတို့ရဲ့သဘောထားအမြင်ထိခိုက်နေဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူအတွေ့အကြုံမြီးကောင်ပေါက် '' အဆင့်တိုးမြှင့်ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ အထူးသ, ပိုမိုမကြာခဏ SEIM အသုံးပြုခဲ့သူ SNSs အပေါ်အချိန်ပိုမိုသုံးစွဲခဲ့သူယောက်ျားလေးများရွယ်တူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏အတည်ပြုခြင်းနှင့်လိင်တက်ကြွရွယ်တူများ၏နံပါတ်များကိုမိမိတို့ခန့်မှန်းအတွက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းတို့၏ယုံကြည်မှုများအတွက်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတိုးပြသခဲ့သည်။ အလားတူပင် SNSs အပေါ်အချိန်ပိုမိုသုံးစွဲခဲ့သူမိန်းကလေးငယ် (နှင့်ဆိုနိုင်သည်လိင်တက်ကြွရွယ်တူများ၏နံပါတ်များကိုမိမိတို့ခန့်မှန်း၌) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများရွယ်တူ '' ခွင့်ပြုချက်သူတို့ရဲ့သဘောထားအမြင်အတွက်တိုးကဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားသဘောထားအမြင် (ဆိုလိုသည်မှာယောက်ျားလေးများ, မိန်းကလေးများအဘို့အမိန့်များနှင့်ဖော်ပြရန်စံချိန်စံညွှန်းအဘို့အဖော်ပြရန်စံချိန်စံညွှန်း), အလှည့်၌, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူအတွေ့အကြုံတိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့်ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါသွယ်ဝိုက်သက်ရောက်မှု၏အမှတ်ခန့်မှန်းချက် (ယောက်ျားလေးများ၏ဖြစ်ရပ်နှင့် Non-သိသာထင်ရှားသော '' SEIM အသုံးပြုမှုနှင့်မိန်းကလေးများ '' SNS ဖော်ပြရန်စံချိန်စံညွှန်းတဆင့်အသုံးပြုနိုင်သည်) သေးငယ်တဲ့ကြပေမဲ့, ကြိမ်မြောက်ese တွေ့ရှိချက်လက်ခံနှင့်အပြန်အလှန်နှစ်ဦးစလုံးလိင်-related အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေဖြစ်ကောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမြားတှငျပါဝငျခွငျးအဘို့အတိုးမြှင့်စံတန်ဖိုးဖိအားနှင့် / သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့ရလဒ်မျှော်လင့်ထားမှု, ဘုံနှင့်လက်ခံခဲ့သည်သောအရာကို၏မြီးကောင်ပေါက် '' သညာပြောင်းလဲပစ်ရန်အလားအလာရှိသည်ကိုပြသ  ။ ကဲ့သို့သော [ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်ချအထူးသဖြင့်ရိပ်မိစံတန်ဖိုးအပြုအမူကလွှမ်းမိုးကြောင်းစိုက်ပျိုးရေးသီအိုရီနှင့်လူမှုစံနှုန်းများသီအိုရီ၏သီအိုရီအယူအဆတွေအတည်ပြုနှင့်မီဒီယာအကြောင်းအရာသူတွေကိုဝေဖန်သဘောထားအမြင်ပုံဖော်စေခြင်းငှါ19, 33, 40] ။ ထို့အပွငျ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက် [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုသက်တူရွယ်တူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများဟာသူတို့ရဲ့သဘောထားအမြင်ပြောင်းလဲနေတဲ့အားဖြင့်မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူခန့်မှန်းကြောင်းသရုပ်ပြယခင်သုတေသနအပေါ်တည်ဆောက်36, 42] ။ အရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက် SNS ကိုအသုံးပြုဖို့-တစ်ခုပူးတွဲမြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မျိုးစုံလွှမ်းမိုးစနစ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ကြောင်းအတည်ပြုအတိအလင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ-ထို့ကြောင့်ထက်ပိုလူမှုရေးကြောင်း ပို. ပို. လူကြိုက်များအပြုအမူသည်ဤအထူးသဖြင့်စစ်မှန်တဲ့ဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်များ၏တစ်ဦးကတတိယအလှူငွေသူတို့လိင်-related အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေနောက်ဆက်တွဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကြိုတင်ခန့်မှန်းပုံအတွက်အရေးကြီးသောကျား, မကွဲပြားမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြခြင်းဖြစ်သည်။ ပထမဦးစွာယောက်ျားလေးများမတူဘဲအတွက်မိန်းကလေးငယ်များ '' SEIM အသုံးပြုမှုကိုလိင်ဆီသို့သက်တူရွယ်တူစံချိန်စံညွှန်းများဟာသူတို့ရဲ့သဘောထားအမြင်အတွက်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြောင်းလဲဆက်စပ်မဟုတ်ခဲ့. ဤသည်တွေ့ရှိချက် [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏လက်ခံမှုနှင့်ပျံ့နှံ့အကြောင်းကိုသဘောထားအမြင်မွေးမြူဖို့မလုံလောက်ဖြစ်နိုင်သည်သော SEIM မှမိန်းကလေးငယ်များ '' နိမ့်ထိတွေ့မှုကိုထင်ဟပ်နိုင်21, 33] ။ ဒါဟာ [သောသူတို့ SEIM သူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုဟာသူတို့ရဲ့အမျိုးသမီးရွယ်တူချင်းအကြား idiosyncratic နှင့် Non-စံတန်ဖိုးကြောင်းယုံကြည်, SEIM ကိုအသုံးပြုဖို့သူအမိန်းကလေးငယ်များ "မှားယွင်းသောထူးခြားမှု" ၏တစ်နည်းတွေ့ကြုံခံစားကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်58] ။ သူတို့ deviant အဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုရှုမြင်သောကြောင့်, မိမိတို့နှင့်အတူလိင်နှင့်ရွယ်တူ '' အဖြစ်မှန်၏ SEIM ရဲ့ကိုယ်စားပေါင်းသင်းလျော့နည်းဖွယ်ရှိဖြစ်နိုင်သည်။ တစ်ဦးဆက်စပ်မှတ်စုတွင်, မိန်းကလေးများအဘို့သက်ရောက်မှုမရှိခြင်း SEIM ၏သဘောသဘာဝ၏စည်းကမ်းချက်များကိုရှင်းပြနိုင်ပါသည်။ [; ဒါက SEIM ယောက်ျားလေးများများအတွက်လိင်ကိစ္စ script များရေပန်းစားနှင့်အတူကိုက်ညီစေခြင်းငှါအထီး-oriented ထုံးစံ (ဆိုလိုသည်မှာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုထားပါသည်) တွင်အဓိကအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံပုံနဲ့သရုပ်ဖော်ထားပါတယ်, သေးသောမိန်းကလေးရေပန်းစား script များနှင့်အတူနှိုငျးယှဉျနိုငျတယျ, တစ်ခုဖြစ်သည် (ဆိုလိုသည်မှာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိုးနှံ, တံခါးစောင့်အဖြစ်မိန်းကလေးငယ်များ43-45]) ။ မိန်းကလေးများ, ထို့နောက်ဤရေပန်းစား script များပယ်ဖျက်နှင့်၎င်းတို့၏လက်ရှိယုံကြည်ချက်တွေကိုပြောင်းလဲနိုင်ရန်အတွက်ပိုပြီးမကြာခဏ SEIM သုံးစွဲဖို့မလိုအပ်ပေမည်။ ဒုတိယအကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်ကွဲပြားခြားနားရိပ်မိသက်တူရွယ်တူစံချိန်စံညွှန်းယောက်ျားလေးများ၏ဆိုးကျိုးများအတွက်ကြီးစိုးဖြစ်နိုင်သည် '' နှင့်မိန်းကလေးများ '' SNS လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူ၎င်းတို့၏နောက်ဆက်တွဲအတွေ့အကြုံအပေါ်ကိုအသုံးပြုပြသပါ။ ယောက်ျားလေးများ '' SNS အသုံးပြုမှုကိုရိပ်မိသက်တူရွယ်တူစံချိန်စံညွှန်းများနှစ်ခုလုံးအမျိုးအစားများ shaped သော်လည်းနောက်ပိုင်းတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူအတွေ့အကြုံသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အဆင့်ဆင့်အတွက်တိုးမြှင့်ခန့်မှန်းကြောင်းလိင်တက်ကြွရွယ်တူများ၏နံပါတ်များကိုမိမိတို့ခန့်မှန်းအတွက်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ဆနျ့ကငျြ, မိန်းကလေးများလိင်၏ခွင့်ပြုချက် '' SNS အသုံးပြုမှုအထူးသဖြင့်ရွယ်တူနှင့် ပတ်သက်. ၎င်းတို့၏ယုံကြည်မှုများတိုးပွားလာခြင်းဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူအတွေ့အကြုံတိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့်ခန့်မှန်း '' ။ ဤသည်ခြားနားချက်, လိင်၏ (dis) ခွင့်ပြုချက်မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးကိုအဓိကဆောင်ပုဒ်သောကျားမလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုဆက်ဆံရေး script များထင်ဟပ်ဟန် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုထားပါသည်ယောက်ျားလေးများများအတွက်အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ်သော်လည်း  ။ ငါt ကိုလည်းတိကျသောအကြောင်းအရာယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများ SNSs အပေါ်ထိတွေ့နေကြအကြောင်းကိုအရေးကြီးသောမေးခွန်းထုတ်။ ဥပမာ, ကမိန်းကလေးတွေသူတို့လိင်ရှာဖွေစူးစမ်းပိုပြီးသက်သာခံစားရဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ SNSs အပေါ်ပိုပြီးလိင်-အပြုသဘောဆောင်သဘောထားများ, ကြုံတွေ့ရကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, မိန်းကလေးငယ်များရဲ့ဆိုနိုင်သည်သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ '' သူတို့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖော်ပြရန်စံချိန်စံညွှန်းအပေါ် SNS အသုံးပြုမှုအထူးသဖြင့်မိန်းကလေးတွေအတွက်၎င်း၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်အခန်းကဏ္ဍပေးထားနောက်ထပ်စာမေးပွဲလိုအပ်ပါတယ် '' ။ အတူတကွဤတွေ့ရှိချက် [, မီဒီယာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်မြီးကောင်ပေါက်ဖန်တီးသည့် (လိင်) တိကျသောမက်ဆေ့ခ်ျကိုဆန်းစစ်၏အရေးပါမှုသွင်ပြင်လက္ခဏာများသောပရိယာယ်မှ post ကိုထောက်ပြ, သူတို့လက်ခံနှင့်အပြန်အလှန်လိင်-related အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာထိတွေ့နေကြ2].
ဤအတန်ဖိုးရှိသောပံ့ပိုးမှုများကိုနေသော်လည်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုဒီဇိုင်းအချို့န့်အသတ်မှတ်ချက်ပြုရပါမည်။ ပထမဦးစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ longitudinal မော်ဒယ်လူမှုရေးသိမြင်မှုသီအိုရီ, စိုက်ပျိုးမှုသီအိုရီများနှင့်မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်-related အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေ, ရိပ်မိသက်တူရွယ်တူစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ related ထားတဲ့အတွက်ယာယီ sequence ကိုအကြောင်းကိုလူမှုရေးစံချိန်စံညွှန်းသီအိုရီကနေရေးဆွဲယူဆချက်အခြားလမ်းကြောင်းစမ်းသပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကို enabled ပေမယ့် သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမတည်ရှိပေမည်။ ဥပမာ, လိင်-related အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေ၏တိုင်းတာခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူအတွေ့အကြုံမြီးကောင်ပေါက် '' အဆင့်ကိုကြားအချိန်နောက်ကျသောဤဆောက်လုပ်ရေးအကြားပိုပြီးတိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကြီးမားလွန်းခဲ့ကြပေမည်။ ဒုတိယအချက်မှာကျွန်တော်သူတို့လိင်-related အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေအတွက်စေ့စပ်အခါတိကျတဲ့အကြောင်းအရာမြီးကောင်ပေါက်အကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမသတင်းအချက်အလက်နှင့်ထိတွေ့ခဲ့သည်ရှိသည်။ လိင်-ဆက်စပ်အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေနောက်ဆုံးမှာရိပ်မိသက်တူရွယ်တူစံချိန်စံညွှန်းအတွက်အပြောင်းအလဲများနှင့်အတူဆက်စပ်နေကြသည်ဘာဖြစ်လို့ပိုပြီးတိကျစွာနားလည်နိုင်ရန်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်တိုးနှင့်အတူပါကမြီးကောင်ပေါက်အွန်လိုင်းကြုံတွေ့ရသည့်မက်ဆေ့ခ်ျ၏သဘောသဘာဝဆန်းစစ်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ ကျနော်တို့ [SEIM အတွက်လိင်၏ပုံဖော်ခြင်းရေပန်းစားအကြောင်းကိုတသမတ်တည်းအကြောင်းအရာ-သရုပ်ခွဲသက်သေအထောက်အထားမဖြစ်သော်လည်း59က SNSs အပေါ်မက်ဆေ့ခ်ျမှကြွလာသောအခါ], ထိုကဲ့သို့သောအသိပညာမလုံလောက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာအစအကောင့်သို့ကွဲပြားခြားနားသော SNSs ၏ကွဲပြားခြားနားသောရည်ရွယ်ချက်ယူဤကိစ်စတှငျအရေးကြီးပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော Grindr နှင့် Tinder အဖြစ်မကြာသေးမီကတီထွင်တည်နေရာ-based SNSs ပိုပြီးတိတိကျကျရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ရှာတွေ့ဆီသို့ပစ်မှတ်ထားနေကြသည်, ထို့ကြောင့် differential ရိပ်မိသက်တူရွယ်တူစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆက်စပ်ပေမည်။ တတိယကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုကိုသုံးပါနှင့် SNS မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်-ဆက်စပ်အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေ၏အညွှန်းကိန်းများအဖြစ်သုံးပါ SEIM အပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများထိုကဲ့သို့သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်-ရှာခြင်းနှင့်ဘာအဖြစ်အခြားအွန်လိုင်းအပြုအမူတွေနဲ့အတူ Integrated မော်ဒယ်များစမ်းသပ်ငါတို့တွေ့ရှိချက်တိုးချဲ့သင့်ပါတယ်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများလည်းလိင်-related အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေ interrelate ဘယ်လိုဆန်းစစ်နှင့်ဆယ်ကျော်သက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖှံ့ဖွိုးတိုးခန့်မှန်းအတွက်ထိုကဲ့သို့သောကိုယ်ပိုင်နှင့်မိသားစု system အဖြစ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏အခြား domains များနှင့်အတူအပြန်အလှန်သငျ့သညျ။ တစ်ဦးဆက်စပ်မှတ်စုတွင်, နှစ်ဦးစလုံးမီဒီယာနှင့်သက်တူရွယ်တူဆက်ဆံရေးအစဉ်အလာကနေပညာရှင်တွေမီဒီယာနှင့်သက်တူရွယ်တူအကျိုးသက်ရောက်မှုများခြွင်းချက်-ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းအချို့သောဆယ်ကျော်သက် [အခြားသူများထက်သူတို့ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုပိုမိုဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်ကြောင်းစောဒကတက်ခဲ့ကြ60, 61] ။ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအားထုတ်မှုအကြောင်းကြားနှင့်လမ်းပြ, သုတေသနများကိုချဲ့ထွင်ကြောင်းစိစစ်အချက်များဖော်ထုတ်ရန်သို့မဟုတ်မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်အပေါ်မီဒီယာအကြောင်းအရာသို့မဟုတ်ရွယ်တူစံချိန်စံညွှန်းများသက်ရောက်မှု attenuate ဖို့ရည်ရွယ်သင့်တယ်။ စတုတ္ထကျနော်တို့ဆယ်ကျော်သက် '(အကောင်းဆုံး) သူငယ်ချင်းများကိုကြားတွင်လိင်နှင့်စပ်လျဉ်းရိပ်မိသက်တူရွယ်တူစံချိန်စံညွှန်းတိုင်းတာ။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများ [ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖှံ့ဖွိုးတိုးတယေဘုယျ, High-status ကိုရွယ်တူချင်းအတွက်အသက်အရွယ်-အိမ်ထောင်ဖက် ပို. ဝေးလံသောအွန်လိုင်းရွယ်တူ, လူအစုအဝေးနှင့်ရင်ခုန်စရာသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်အပါအဝင်ရွယ်တူ၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကြားတွင်ရိပ်မိစံချိန်စံညွှန်းမှ differential ဆက်စပ်ရှိမရှိဆန်းစစ်သင့်တယ်60] ။ ပဉ္စမကျနော်တို့ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကို Self-အစီရင်ခံစာများကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ Integrated မော်ဒယ်အတွက်သဘောတရားများကိုတိုင်းတာ။ ဒီတုန်းပဲလိင်အပေါ်ဒေတာစုဆောင်းရန်အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သော်လည်းက [မြီးကောင်ပေါက်မှုကြောင့်အရှက်, မရရှိခြင်း၏, ဒါမှမဟုတ်လူမှုရေးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကိုကြောက်ရွံ့ဖို့, သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများသို့မဟုတ်လိင်-related မီဒီယာအသုံးပြုမှုကို underreport စေခြင်းငှါကောင်းစွာမှတ်တမ်းတင်ဖြစ်ပါသည်62] ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်များနယ်သာလန်အတွက်အဆင်ပြေနမူနာအပေါ်အခြေခံထားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုမြီးကောင်ပေါက်များ၏အခြားသောလူဦးရေမှယေဘူယျနိုင်သည့်ရန်အတိုင်းအတာထပ်မံစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလိုအပ်သည်။
မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖှံ့ဖွိုးတိုးမျိုးစုံအပြန်အလှန်ဆက်စပ်သောစနစ်များကိုကလွှမ်းမိုးနေတဲ့ရှုပ်ထွေးသောဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဤမျိုးစုံစနစ်များအကြား, အင်တာနက်နှင့်ရွယ်တူလူငယ်များသည် '' နေ့စဉ်အသက်တာ၌တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ထင်ရှားတဲ့အခန်းကဏ္ဍသိမ်းပိုက်; သေးမြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်သုတေသနပြုသည်ဤစနစ်များကိုခဲအတူတကွလေ့လာခဲ့သူဖြစ်သည်။ လက်ရှိလေ့လာမှု (ဆိုလိုသည်မှာ, SNS အသုံးပြုမှု) လိင်-ဆက်စပ်အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူအတွေ့အကြုံမြီးကောင်ပေါက် '' အဆင့်ကိုခန့်မှန်းအတွက်ရိပ်မိသက်တူရွယ်တူစံချိန်စံညွှန်းနှင့်ဆက်စပ်နေပါသည်ဘယ်လိုလက်ခံ (ဆိုလိုသည်မှာ SEIM ကိုသုံးပါ) နှင့်အပြန်အလှန်ရှင်းပြထားတဲ့ Integrated မော်ဒယ်စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်လိင်-related အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေနှစ်ခုစလုံးအမျိုးအစားများဖြစ်ကောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမြားတှငျပါဝငျခွငျးအဘို့အတိုးမြှင့်စံတန်ဖိုးဖိအားနှင့် / သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့ရလဒ်မျှော်လင့်ထားမှု, ဘုံသည်အဘယ်အရာ၏မြီးကောင်ပေါက် '' သညာပြောင်းလဲပစ်ရန်အလားအလာရှိသည်နှင့်လက်ခံခဲ့သည်ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ကဲ့သို့သော, သူတို့ကမြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်သုတေသနတစ်ခု multisystemic ချဉ်းကပ်ဘို့လိုအပ်ကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်လူငယ်များသည် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးမြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်ထားကြောင်းကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအားထုတ်မှုကိုလမ်းပြလိမ့်မည်။ ထိုသို့သောအားထုတ်မှုအနက်ကိုဘော်ပြခြင်းနှင့်ရှုထောင့်အွန်လိုင်းအကြောင်းအရာတွေကိုထဲသို့သွင်းထားဖို့ဘယ်လိုလူငယ်ပညာပေးအပေါ်, ဒါပေမယ့်လည်းရိပ်မိစံချိန်စံညွှန်းမှလွယ်ကူစွာထိခိုက်လျှော့ချရည်ရွယ်ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးဆဲအာရုံစိုက်သင့်တယ်မသာ။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုအတွက်ဒေတာနယ်သာလန်နိုင်ငံကောက်ယူပိုကြီးတဲ့ longitudinal လေ့လာမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု "Project မှကြယ်ပွ" (ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနှင့်လိင်၏လမ်းကြောင်းအပေါ်လေ့လာရေး) လို့ခေါ်တဲ့အဖြစ်စုဆောင်း, သိပ္ပံနဲ့သုတေသန (NWO ဘို့ဒတျချြအဖွဲ့အစည်းများကငွေကြေးထောက်ပံ့သောကြသည် ဟူ. ၎င်း, http://www.nwo.nl) နှင့်လိင်၏သိပ္ပံသုတေသနရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (FWOSl http://www.fwos.nl) [NWO Grant ကမျှ။ 431-99-018] ။ အဆိုပါဒကာလေ့လာမှုဒီဇိုင်း, အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ထုတ်ဝေရန်ဆုံးဖြတ်ချက်သို့မဟုတ်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏ပြင်ဆင်မှုမရှိအခန်းကဏ္ဍရှိခဲ့ပါတယ်။
1 ။ Boies SC, Knudson, G, Young က J ကို (2004) အင်တာနက်, လိင်နှင့်လူငယ်အချို့: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ လိင်စွဲ compulsive 11: 343-363 ။ Doi: 10.1080 / 10720160490902630
2 ။ Doornwaard သည် SM, Bickham DS, Rich M က, Vanwesenbeeck ငါဗန်တွင်း Eijnden RJJM, Ter Bogt TFM (2014) လိင်-related အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေနှင့်မြီးကောင်ပေါက် '' ခန္ဓာကိုယ်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-သဘောထားအမြင်။ ကလေးအထူးကု 134: 1103-1110 ။ Doi: 10.1542 / peds.2008-1536 [PubMed]
3 ။ Owen EW, Behun RJ, Manning JC, ရိဒ် RC (2012) မြီးကောင်ပေါက်ပေါ်ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏သက်ရောက်မှု: အသုတေသနတစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ လိင်စွဲ compulsive 19: 99-122 ။ Doi: 10.1080 / 10720162.2012.660431
4 ။ ဘရောင်း JD, Keller က S, Stern ပာ S ကို (2009) လိင်, လိင်, sexting နှင့် sexEd: ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့်မီဒီယာ။ prev Res 16: 12-16 ။
5 ။ Facebook ပေါ်မှာ Doornwaard သည် SM, Moreno MA, ဗန်တွင်း Eijnden RJJM, Vanwesenbeeck ငါ Ter Bogt TFM (2014) Young ကမြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရင်ခုန်စရာရည်ညွှန်း display တွေ။ J ကိုမြီးကောင်ပေါက်ကနျြးမာရေး 55: 535-541 ။ Doi: 10.1016 / j.jadohealth.2014.04.002 [PubMed]
6. Moreno MA, Brockman LN, Wasserheit JN, Christakis DA (2012) Facebook တွင်ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်မှုဆိုင်ရာရည်ညွှန်းဖော်ပြချက်ကိုရှေ့ပြေးစမ်းသပ်ချက်။ J ကိုလိင် Res 49: 390-399 ။ Doi: 10.1080 / 00224499.2011.642903 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
၇။ Brown JD, L'Engle KL (7) X-Rated - အမေရိကန်အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောမီဒီယာနှင့်ထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ်သောလိင်စိတ်သဘောထားများနှင့်အပြုအမူများ။ Commun Res 2009: 36-129 ။ Doi: 10.1177 / 0093650208326465
၈။ Lo V, Wei R (8) အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေနှင့်ထိုင်ဝမ်ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူများနှင့်ထိတွေ့ခြင်း J ကိုအသံလွှင့်အီလက်ထရွန်မီဒီယာ 2005: 49-221 ။ Doi: 10.1207 / s15506878jobem4902_5
9 ။ ပတေရုသ J ကို, Valkenburg pm တွင် (2010) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်တာနက်ပစ္စည်းမြီးကောင်ပေါက် '' အသုံးပြုမှုများ၏သက်ရောက်မှုအခြေခံ process လုပ်တယ်: ရိပ်မိသရုပ်မှန်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍ။ Community Res 37: 375-399 ။ Doi: 10.1177 / 0093650210362464
10 ။ ပတေရုသ J ကို, Valkenburg pm တွင် (2009) ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်တာနက်ကိုပစ္စည်းမှထိတွေ့မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု: တစ်ဦးက longitudinal လေ့လာမှု။ Hum Community Res 35: 171-194 ။ Doi: 10.1111 / j.1468-2958.2009.01343.x
11. Vandenbosch L, Eggermont S (2012) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုကိုနားလည်ခြင်း။ မီဒီယာနှင့်ထိတွေ့ခြင်းနှင့်အလှအပစံနမူနာများ၊ မိန်းကလေးများအနေဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောပြည့်စုံသောချဉ်းကပ်မှု။ J ကို Commun 62: 869-887 ။ Doi: 10.1111 / j.1460-2466.2012.01667.x
12 ။ Vandenbosch L ကို, ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများ၏ Eggermont S ကို (2013) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ: မီဒီယာထိတွေ့မှုနှင့်ယောက်ျားလေးများ '' သဏ္ဌာန်စံနမူနာ၏ International, Self-objectification နှင့်ခန္ဓာကိုယ်စောင့်ကြည့်။ အမျိုးသားများအတွက် Masc 16: 283-306 ။ Doi: 10.1177 / 1097184X13477866
၁၃။ Baumgartner SE, Valkenburg PM, Peter J (၂၀၁၁) မြီးကောင်ပေါက်များ၏အန္တရာယ်များသောလိင်ဆိုင်ရာအွန်လိုင်းအမူအကျင့်အပေါ်ဖော်ပြခြင်းနှင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးသက်တူရွယ်တူစံနှုန်းများ၏လွှမ်းမိုးမှု။ Cyberpsychol Behav Soc Netw 13: 2011-14 ။ Doi: 10.1089 / cyber.2010.0510 [PubMed]
14 ။ Livingstone က S, ဟက်ဒေါ် L ကို (2008) သားသမီးတို့အဘို့အန္တရာယ်များအတွေ့အကြုံများအွန်လိုင်း: ကလေးများနှင့်အင်တာနက်ပေါ်ရှိဥရောပသုတေသန Charting ။ ကလေးသူငယ် Soc 22: 314-323 ။ Doi: 10.1111 / j.1099-0860.2008.00157.x
15 ။ Bronfenbrenner ဦး (1989) ဂေဟစနစ်များအားသီအိုရီ။ အမ်းကလေး Dev မှ 6: 187-249 ။
16 ။ Kotchick BA, Shaffer တစ်ဦးက, Forehand R ကို, Miller က KS (2001) ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူ: တစ်ဦးက Multi-system ကိုရှုထောင့်။ Clin Psychol ဗြာ 21: 493-519 ။ Doi: 10.1016/S0272-7358(99)00070-7 [PubMed]
17 ။ Lerner RM, Steinberg L ကို, အယ်ဒီတာများ: ခုနှစ်တွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ဘရောင်း BB, Larson J ကို (2009) ရွယ်တူချင်းဆက်ဆံရေး။ ဆယ်ကျော်သက်စိတ်ပညာ၏လက်စွဲစာအုပ်, အသံအတိုးအကျယ် 2: ဆယ်ကျော်သက်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတနယူးယောက်အပေါ် Contextual လွှမ်းမိုးမှု, နယူးယော့: Wiley; စစ။ 74-103 ။
18 ။ Steinberg L ကို, မောရစ် AS (2001) ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ Annu ဗြာ Psychol 52: 83-110 ။ Doi: 10.1891 / 194589501787383444 [PubMed]
19 ။ van de Bongardt သက်တူရွယ်တူစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏သုံးမျိုးတို့အကြားဆက်ဆံရေး: D, Reitz အီး, Sandfort T က, Dekovícအမ် (2014) Meta-analysis သည်။ Pers Soc Psychol ဗြာ: စာနယ်ဇင်း၌တည်၏။ Doi: 10.1177 / 1088868314544223 [PubMed]
20 ။ က Madden M က, Lenhart တစ်ဦးက, Meave: D, Cortesi S က, Gasser ဦး (2013) ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေနှင့်နည်းပညာ 2013 ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: Pew Internet နှင့်အမေရိကန်ဘဝက Project မှ။
21 ။ ရပ်ကွက် LM (2003) အမေရိကန်လူငယ်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုဆက်ဆံရေးအတွက်ဖျော်ဖြေရေးမီဒီယာ၏အခန်းကဏ္ဍကိုနားလည်ခြင်း: ပင်ကိုယ်မူလသုတေသနတစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ dev ဗြာ 23: 347-388 ။ Doi: 10.1016/S0273-2297(03)00013-3
22 ။ ဘရောင်း JD (2000) ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအစားအစာ။ J ကိုမြီးကောင်ပေါက်ကနျြးမာရေး 27S: 35-40 ။ Doi: 10.1016/S1054-139X(00)00141-5 [PubMed]
23 ။ သံမဏိ JR, Brown က JD (1995) ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အခန်းထဲမှာယဉ်ကျေးမှု: နေ့စဉ်အသက်တာ၏အခြေအနေတွင်မီဒီယာလေ့လာ။ J ကိုလူငယ်မြီးကောင်ပေါက် 24: 551-576 ။ Doi: 10.1007 / BF01537056
၂၄ Bleakley A၊ Hennessy M, Fishbein M (၂၀၁၁) မြီးကောင်ပေါက်များ၏မီဒီယာရွေးချယ်မှုတွင်လိင်အကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေခြင်းပုံစံ။ J ကိုလိင် Res 24: 2011-48 ။ Doi: 10.1080 / 00224499.2010.497985 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
25 ။ Hald GM က, Kuyper L ကိုအာဒံ PCG, De ကျေး JBF (2013) လုပ်နေတာရှင်းပြကြည့်ရှုပါသလား? ဒတ်ခ်ျမြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူငယ်လူကြီးများ၏ကြီးမားသောနမူနာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအကြားအသင်းအဖွဲ့များအကဲဖြတ်။ J ကိုလိင် Med 10: 2986-2995 ။ Doi: 10.1111 / jsm.12157 [PubMed]
26. Kim JL, Collins RL, Kanouse DE, Elliott MN, Berry SH, Hunter SB ။ (၂၀၀၆) လိင်အဆင်သင့်ဖြစ်မှု၊ အိမ်တွင်းမူဝါဒများနှင့်အဓိကဖျော်ဖြေရေးရုပ်မြင်သံကြား၌ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းကိုအခြားခန့်မှန်းသူများ။ မီဒီယာစိတ်ပညာ 2006: 8-449 ။ Doi: 10.1207 / s1532785xmep0804_6
27 ။ lam သမဝါယမ, ချမ်း DK (2007) ဟောင်ကောင်မှာရှိတဲ့လူပျိုတို့ဖွငျ့ cyberpornography များအသုံးပြုမှု: တချို့ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Correlate ။ Arch လိင်ပြုမူနေ 36: 588-598 ။ Doi: 10.1007/s10508-006-9124-5 [PubMed]
28 ။ Bandura တစ်ဦးက (1986) အတွေးနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်လူမှုအမြစ်တစ်ဦးကလူမှုရေးသိမြင်မှုသီအိုရီ။ Englewood ကမ်းပါး, NJ: Prentice-ခန်းမ။
29 ။ Huston AC အ, Wartella အီး, Donnerstein အီး (1998) ကမီဒီယာမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ၏သက်ရောက်မှုတိုင်းတာခြင်း။ Menlo Park, CA: ခိုင်ဆာမိသားစုဖောင်ဒေးရှင်းက။
30 ။ Moreno MA, Kolb J ကို (2012) လူမှုကွန်ယက်ဆိုဒ်များနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ကျန်းမာရေး။ ကလေးအထူးကု Clin မြောက်အမေရိက Am 59: 601-612 ။ Doi: 10.1016 / j.pcl.2012.03.023 [PubMed]
၃၁. Pujazon-Zazik M, Park MJ (31) တွစ်တာတင်ရန် (သို့) တွစ်တာမတင်ရန် - ကျား၊ မကွဲပြားမှုနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏လူမှုအင်တာနက်အသုံးပြုမှု၏အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောကျန်းမာရေးရလဒ်များ။ နံနက် J ကို Mens ကျန်းမာရေး 2010: 4-77 ။ Doi: 10.1177 / 1557988309360819 [PubMed]
32 ။ Smahel: D, Subrahmanyam ငွေကျပ် (2007) "မဆိုမိန်းကလေးတွေစာနယ်ဇင်း 911 chat ချင်": စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့် unmonitored ဆယ်ကျော်သက်ချက်တင်ခန်းထဲမှာအဖော်ရွေးချယ်ရေး။ Cyberpsychol ပြုမူနေ 10: 346-353 ။ Doi: 10.1089 / cpb.2006.9945 [PubMed]
33 ။ Gerbner, G, စုစုပေါင်း L ကို, မော်ဂန်က M, Signorielli N ကို (1994) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အတူကြီးပြင်း: Bryant J ကို, Zillman: D, အယ်ဒီတာများ: ခုနှစ်တွင်အဆိုပါစိုက်ပျိုးရှုထောင့်။ မီဒီယာသက်ရောက်မှု: သီအိုရီနှင့်သုတေသနတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ။ Hillsdale, NJ: Erlbaum; စစ။ 17-41 ။
34 ။ Buerkel-Rothfuss NL, Strouse JS (1993) မီဒီယာထိတွေ့မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏သဘောထားအမြင်: Greenberg BS, Brown က JD, Buerkel-Rothfuss NL, အယ်ဒီတာများ: အဆိုပါစိုက်ပျိုးအယူအဆမှာအိပ်ခန်းမှလှုံ့ဆော်ပေး။ မီဒီယာ, လိင်, နှင့်ဆယ်ကျော်သက်ကလေး။ Creskill, NJ: Hampton စာနယ်ဇင်း; စစ 225-247 ။
၃၅။ Martino SC, Collins RL, Kanouse DE, Elliott M, Berry SH (၂၀၀၅) ရုပ်မြင်သံကြား၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ဆက်စပ်မှုကိုကြားခံဆက်သွယ်ပေးသည့်လူမှုသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များ။ J ကို Pers Soc Psychol 35: 2005-89 ။ Doi: 10.1037 / 0022-3514.89.6.914 [PubMed]
36. Ward LM, Epstein M, Caruthers A, Merriwether A (2011) အမျိုးသားများ၏မီဒီယာအသုံးပြုမှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသိမှုနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူ - စေ့စပ်သေချာသည့်ပုံစံကိုစမ်းသပ်ခြင်း။ Dev Psychol 47: 592-602 ။ Doi: 10.1177 / 1090198110385775 [PubMed]
37 ။ ရပ်ကွက် LM, Rivadeneyra R. (1999) မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်မျှော်လင့်ချက်များမှဖျော်ဖြေရေးရုပ်မြင်သံကြားပံ့ပိုးမှုများကိုသာ: ကြည့်ရှုသူပါဝင်ပတ်သက်မှုနှိုင်းယှဉ်ငွေပမာဏကိုကြည့်ရှုခြင်း၏အခန်းကဏ္ဍ။ J ကိုလိင် Res 36: 237-249 ။ Doi: 10.1080 / 00224499909551994
38. Moreno MA, Briner LR, Williams A, Walker L, Christakis DA (၂၀၀၉) တကယ့်အသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်“ တကယ့်ကိုအေးမြခြင်း” - မြီးကောင်ပေါက်များသည်လူမှုရေးကွန်ရက်များ၌ပြသသည့်အရက်ညွှန်းကိန်းများအကြောင်းပြောဆိုကြသည်။ J ကိုဆယ်ကျော်သက်ကျန်းမာရေး 2009: 45-420 ။ Doi: 10.1016 / j.jadohealth.2009.04.015 [PubMed]
39. Moreno MA, Swanson MJ, Royer H, Roberts LJ (2011) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံမှုများ - အမျိုးသမီးများ၏လူမှုကွန်ယက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုးကားချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ယောက်ျားကောလိပ်ကျောင်းသားများ၏အမြင်။ J ကိုကလေးအထူးကု Adolesc မီးယပ် 24: 85-89 ။ Doi: 10.1016 / j.jpag.2010.10.004 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
40 ။ Berkowitz အေဒီ (2005) ခုနှစ်တွင်လူမှုရေးစံချိန်စံညွှန်းချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုခြုံငုံသုံးသပ်ချက်: Lederman LC, Stewart က LP သို့အယ်ဒီတာများ။ တစ်ဦးကလူမှုရေးအရတည်ရှိပြီးကျန်းမာရေးဆက်သွယ်ရေးမဲဆွယ်စည်းရုံးရေး Cresskill, NJ: ကောလိပ်ကျောင်းအရက်သောက်၏ယဉ်ကျေးမှုပြောင်းလဲခြင်း Hampton စာနယ်ဇင်း; စစ။ 193-214 ။
41 ။ Rimal RN, ရီးရဲလ်ငွေကျပ် (2003) အပြုအမူတွေအပေါ်ကိုရိပ်မိစံချိန်စံညွှန်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနားလည်ခြင်း။ Community Theor 13: 184-203 ။ Doi: 10.1111 / j.1468-2885.2003.tb00288.x
42 ။ Bleakley တစ်ဦးက, Hennessy M က, Fishbein M က, ဂျော်ဒန်တစ်ဦးက (2011) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာလွှမ်းမိုးမှုဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုဘယ်လိုထိတွေ့ရှင်းပြဖို့သမာဓိမော်ဒယ်အသုံးပြုခြင်း။ ကနျြးမာရေးပညာရေးကိုပြုမူနေ 38: 530-540 ။ Doi: 10.1177 / 1090198110385775 [PubMed]
43 ။ Bordini GS, Sperb TM အလိုအလျောက် (2013) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်ဆစံ: 2001 နှင့် 2010 အကြားစာပေ၏တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ လိင်သတ်ဖို့ 17: 686-704 ။ Doi: 10.1007/s12119-012-9163-0
44 ။ ခရော M က, Popp: D (2003) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်ဆစံချိန်စံညွှန်းများ: တစ်ဦးကသုံးသပ်မှုနှင့်သုတေသန၏ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခု၏အတိုင်းအတာများဝေဖန်မှု။ J ကိုလိင် Res 40: 13-26 ။ Doi: 10.1080 / 00224490309552163 [PubMed]
45 ။ Wiederman မဂ္ဂါဝပ် (2005) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များ၏ကျားမသဘာဝ။ အဆိုပါမိသားစုဂျာနယ်: စုံတွဲများနှင့်မိသားစုများအတွက်တိုင်ပင်ခြင်းနှင့်ကုထုံး 13: 496-502 ။ Doi: 10.1177 / 1066480705278729
46 ။ အိပ်ခန်းထဲမှာမက်ကော်မစ် NB, Brannigan GG, Laplante MN (1984) လူမှုလိုလား: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးအတွက်ခွင့်ပြုချက်လှုံ့ဆော်မှု၏အခန်းက္ပ။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ 11: 303-314 ။ Doi: 10.1007 / BF00287522
47 ။ Tolman DL ကင်မ် JL, Schooler: D, Sorsoli CL (2007) ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက်လိင်ဖှံ့ဖွိုးတိုးအကြားအသင်းအဖွဲ့များ Rethinking: အာရုံသို့ကျားမရှိမယ်။ J ကိုမြီးကောင်ပေါက်ကနျြးမာရေး 40: 84.e9-84.e16 ။ Doi: 10.1016 / j.jadohealth.2006.08.002 [PubMed]
48 ။ ပတေရုသ J ကို, Valkenburg pm တွင် (2006) အင်တာနက်ပေါ်ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း '' ထိတွေ့မှု။ Community Res 33: 178-204 ။ Doi: 10.1177 / 0093650205285369
49 ။ Ender CK, Bandalos DL (2001) ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းမော်ဒယ်များအတွက်ပျောက်ဆုံးနေဒေတာအတွက်အပြည့်အဝသတင်းအချက်အလက်အများဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေကိုခန့်မှန်း၏ဆွေမျိုးစွမ်းဆောင်ရည်။ Struct Equ မော်ဒယ်လင်း 8: 430-457 ။ Doi: 10.1207 / S15328007SEM0803_5
50 ။ Bradburn မိုင်, Sudman S က, Wansink B က (2004) မေးခွန်းများကိုမေး: အဓိပ္ပါယ်လမ်းညွှန်ဒီဇိုင်း questionnaire ရန်။ စျေးကွက်သုတေသနနိုင်ငံရေး, ရွေးကောက်ပွဲနှင့်လူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာရေးမေးခွန်းများအတွက် ed Revised ။ ဆန်ဖရန်စစ္စကို,, CA: Jossey-ဘေ့။
51 ။ Jaccard J ကို, Dittus PJ, ဂေါ်ဒွန် VV (1996) ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်တားဆေးအပြုအမူ၏မိခင် Correlate ။ Fam Plann ရှုထောင့် 28: 159-185 ။ Doi: 10.2307 / 2136192 [PubMed]
52 ။ ဆယ်ကျော်သက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်အရှေ့ PL, Khoo ST, Reyes BT (2006) အန္တရာယ်နှင့်အကာအကွယ်အချက်များ: တစ်ဦးက longitudinal, အလားအလာလေ့လာမှု။ Apple က Dev မှသိပ္ပံ 10: 188-199 ။ Doi: 10.1207 / s1532480xads1004_3
53 ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူ၏သက်တူရွယ်တူသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအပေါ်လိင်နှင့်ကွန်ဒုံးသက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. Whitaker DJ သမား, Miller က KS (2000) မိဘ-ဆယ်ကျော်သက်ဆွေးနွေးမှုများ။ J ကိုမြီးကောင်ပေါက် Res 15: 251-273 ။ Doi: 10.1177 / 0743558400152004
54. Muthén LK, Muthén B (2014) Mplus ဗားရှင်း 7.2 ။ Los Angeles မြို့, CA: Muthén & Muthén။
55 ။ Efron, B, Tibshirani RJ (1993) ကို bootstrap နယူးယောက်မြို့မှတစ်ဦးမိတ်ဆက်, နယူးယော့: ချပ်မန်းနှင့်ခန်းမ။
56 ။ Kline RB (1998) အခြေခံမူများနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းမော်ဒယ်လ်များ၏အလေ့အကျင့်။ လန်ဒန်, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း: Guilford နှိပ်ပါ။
57 ။ Baron နှင့် Kenny အပြင် Hayes AF (2009): အဆိုပါထောင်စုနှစ်သစ်အတွက်စာရင်းအင်းဖျန်ဖြေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ Community Monogr 76: 408-420 ။ Doi: 10.1080 / 03637750903310360
58 ။ ဗန်တွင်း Eijnden RJJM, Buunk ကို BP, Bosweld W က (2000) အလားတူ Feeling သို့မဟုတ်ထူးခြားသော feeling: ယောက်ျားနှင့်မိန်းမသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုရိပ်မိပုံ။ Pers Soc Psychol Bull 26: 1540-1549 ။ Doi: 10.1177 / 01461672002612008
59 ။ porn ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်ဘော်စတွန်ပြန်ပေးဆွဲထားပြီးဘယ်လို, MA: ထမင်းစားခန်း, G (2010) Pornland Beacon နှိပ်ပါ။ [PubMed]
60 ။ Brechwald WA, Prinstein MJ (2011) homophily အပြင်: သက်တူရွယ်တူသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်စဉ်များကိုနားလည်တိုးတက်လာ၏တစ်ဦးကဆယ်စုနှစ်။ J ကို Res မြီးကောင်ပေါက် 21: 166-179 ။ Doi: 10.1111 / j.1532-7795.2010.00721.x [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
61 ။ Valkenburg pm တွင်, မီဒီယာဆိုးကျိုးများသုတေသန၏အနာဂတျအတှကျပတေရုသ J ကို (2013) ငါးခုစိန်ခေါ်မှုများ။ int J ကို Community 7: 197-215 ။ 1932-8036 / 20070238
62 ။ Brener ND, Billy Jo, မြီးကောင်ပေါက်အကြား Self-အစီရင်ခံကျန်းမာရေးအန္တရာယ်အပြုအမူများ၏တရားဝင်မှုကိုထိခိုက်စေအချက်များ၏ Grady WR (2003) အကဲဖြတ်: သိပ္ပံနည်းကျစာပေထံမှအထောက်အထား။ J ကိုမြီးကောင်ပေါက်ကနျြးမာရေး 33: 436-457 ။ Doi: 10.1016/S1054-139X(03)00052-1 [PubMed]